မှားပြီးမှတော့ မထူးပါဘူး – Grab Love Story
အစောကြီးနိုးနေသည်။ယောကျာ်းကလည်း မနက်ကတည်းက အလုပ်သွား၍တစ်ယောက်တည်း
” ဟယ်လို…. မမလား “
” အေး ပြော ညီမလေး “
” ဒီည ကာရာအိုကေသွားဆိုမလို.လိုက်မလား “
” ဘယ်သူတွေပါလဲဟ “
” မန်နေဂျာကြီးရယ် သမီးတို.သူငယ်ချင်းစုံတွဲ ၃ တွဲရယ်လေပြီးရင်အိမ်မပြန်ဘူးလေ စားသောက်ပြီး ရုံးမှာပြန်အိပ်ကျမှာ “
” လိုက်တော.လိုက်ချင်တယ်ဟ. ငါက ၁ယောက်တည်းဖြစ်နေမှာဟ “
” ရပါတယ်မမကလည်းး….မန်နေဂျာကြီးရှိသားပဲ … ဟီး ဟီး “
” အင်းပါ အိမ်ကလွှတ်ပါမလားမသိဘူး…”
” အာ ..မမကယောကျာ်းပိုင်ပါတယ် ..ညီမလေးအိမ်သွားအိပ်မလို ဆိုပြီးပြောလိုက်ပေါ့……”
” အင်းအင်း ပြောကြည်. လိုက်မယ် “
” အိုကေ လေ မမ “
ရီရီဝေ ယောကျာ်းဆီ ချက်ချင်းဖုန်းဆက်လေတော့သည်။
” အေး မိန်းမပြော..”
” ဒီနေ.ညီမလေး အိမ်သွားအိပ်မလို. “
” အာ.. မသွားပါနဲ့. ညကဇာတ်လမ်းမပြတ်သေးဘူးလေ..”
” တော်ပါ သူကဖြင်.မတောင်နိုင်ပဲနဲ. “
” ဒီည ဆေးသောက်မယ်လေ.အမုန်း လုပ်မယ်လေ “
” စိတ်လျှော.လိုက်တော.မောင်ရာ နောက်နေ.ပေါ.နော် “
” အင်းပါ အင်းပါ မိန်းမရာ “
” ဟုတ်ကဲ. “
ဦးထွန်းထွန်းသည် ကုမ္ပဏီ တခုမှမန်နေဂျာဖြစ်ပြီးအသက်၅၀ခန်.ရှိသည်။မိန်းမကိစ္စအလွန်ဝါသနာကြီးသြွူဖစ်သည်။မိန်းမ ရှိသော်လည်း အားမရနိုင်သေးပဲကြုံလျှင်ကြုံသလို ဆော်ချချင်နေသေးသည်။လီးကိုလည်း
သူအကြောင်းသိသော ဖာသည်မများဆိုလျင် သူနှင်.မလိုက်လိုကြချေ….ဒီနေ့လည်းရုံးက ကောင်မလေးများအား ကာရာအိုကေပို.ပေးမည်.။ပြီးလျှင် မပြန်ပဲရုံး၌အိပ်မည်ဟုပြောကာဂွင်ဖန်နေတော့သည်။
နင်တို.ဒီည ဘယ်နစ်ယောက်လိုက်မှာလဲ..ငါ ကာရာအိုကေခန်း စီစဉ်ထားမလို. “
” ဟုတ်ကဲ အန်ကယ် စုစုပေါင်း ၇ ယောက်ပါ “
” ၇ ယောက်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေပဲလား…”
” ဟီးဟီး မဟုတ်ဘူး အန်ကယ်
သမီးတို့ အတွဲရယ် သူဇာတို့အတွဲရယ် ပပတို့အတွဲရယ် သမီးအစ်မ ၁ယောက်ပါအန်ကယ် “
ဦးထွန်းထွန်းစိတ်ညစ်ရလေပြီ ။သူထင်တာ ကောင်မလေးများနှင့် သွားရမယ် ထင်ပြီးအကုန်ကျခံခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခုတော.
” အေးအေး ငါ ရး၀၀ဆို ကာရာအိုကေဆိုင်ကစောင်.နေမယ်..”
” ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်ကယ်.”
ရေချိုးအဝတ်အစားလဲကာ ညီမအိမ်သို.ထွက်လာခဲ.သည်။ညီမအိမ်ရောက်တော.အားလုံးလူစုံနေပြီး ဆုမွန်ကရီရီဝေအားကြည့်ကာ
” ဟာ.. မမကလန်းလှချည်လား အပျိုလေးကျနေတာပဲ “
ဆုမွန်ပြောလည်းပြောချင်စရာပင် ရီေ၀၀တ်ထားသည်က စကတ်အတိုအကြပ်ကို အပေါ်က လည်ဟိုက်အကျီ်အတိုဝတ်ထားတော.အသားစိုင်များပေါ်လွင်နေတော.သည်။ ပပ ရည်းစား သီဟ , သူဇာ ရည်းစား
အောင်အောင် နှင်.ဆုမွန်ရည်းစားကျော်ထွန်းတို.မှာ ရီရီဝေအား စားမတက်ဝါးမတက်မျက်လုံးများဖြင်.ကြည်.နေကြသည်။ ကျော်ထွန်းအားသီဟ က .”.ဟေ.ကောင် မင်းဆော်အစ်မ က မင်းဆော်ထက်တောင်
မိုက်သေးတယ်ကွာ ” ” အေးကွ..ငါလည်းလူလည်းပြီးလိုးပလိုက်ချင်တယ်ကွာ .. ဖင်ကြီးက အိနေတာပဲ “
ဟုပြောနေကြသည်။သူဇာ က ” ကဲကဲသွားကြမယ် အန်ကယ်ကြီးစောင်.နေတော.မယ် လာလာ သွားကြစို………”
ဦးထွန်းထွန်းသည် နည်းနည်းပါးပါးမူးစပြုလာပြီဖြစ်သည်။သောက်တာက ၃ပက်တည်းဖြစ်သော်လည်း
မူးပြီး စိတ်ကထနေသည် ။ ကာရာအိုကေခန်းထဲဆိုတော.နေရကျပ်နေသည်။ထိုစဉ် ဆုမွန်တို.အဖွဲ.ရောက်လာသည်။ စုစုပေါင်း၇ ယောက် ။ သူဇာ ပပ ဆုမွန်နှင့်သူ မသိသော.ကောင်မလေး၁ယောက် ,
အသားဖြူတော့ ထင်းကနဲပေါ်နေသည်။ဦးထွန်းထွန်းမှာ ချက်ချင်းပင် လီးတောင်လာပြီး လုပ်ချင်စိတ်များ
” ကဲ ကဲထိုင်ကြပါ ထိုင်ကြပါ ဆုမွန် မိတ်ဆက်ပေးလေ…”
” အော် ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ် ဒါက သမီးအစ်မ ရီဝေ. သူက ပပရည်းစား သီဟ, သူက
သူဇာ့ ရည်းစား အောင်အောင် သူကတော့ သမီးရဲ……ဟီးဟီး ရည်းစား “
” အော် ဟုတ်ပါပြီ စားစရာတွေ မှာကြလေအန်ကယ် ကတော.နည်းနည်းသောက်တယ်
သမီးတို.ရော မှာလေ “
ဆုမွန်က ” သမီးက spy သောက်မယ်..နင်တို.ရော
အချိန်ကြာလာသည်နှင်အမျှ ဆို တာရော သောက်တာရော များလာပြီးအားလုံးမူးလာကြပြီး
ရီရီဝေလည့်း မူးစပြုလာလေပြီ ။ မမူးသေးသည်ကတော.ဦးထွန်းထွန်းပင်။ သူကတော့သူအကြံနှင့်သူ
ဖြစ်သည်။ ရီဝေကို မြင်ပြီးကတည်းက လိုးချင်စိတ်ကိုထိန်းမရတော့၍ မသောက်ပဲနေနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီညတော.ဒီကောင်မလေးကို ရအောင်လိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး အားလုံးမူးအောင် တိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
” ကဲသာ ကဲနော် စားချင်တာ မှာကြ “
ဦးထွန်းထွန်း မျက်လုံးမှာရီရီဝေပေါင်ပေါ်တွင်သာ ရောက်နေတော့သည်။ရီရီဝေမှာလည်းspy ၄လုံး
ကုန်သွားသဖြင်.မူးလာသဖြင့်ခဏနားနေခိုက် ဦးထွန်းထွန်းအားကြည့်လိုက်ရာ သူအားစားမတတ် ဝါးမတက်မျက်လုံးဖြင့်ကြည့်နေခိုက်နှင့် ဆုံသွားတော့သည်။ မူးလည်းမူး ညက ယောကျာ်းနှင့်ကလည်းမပြီးခဲ့၍
ကာမစိတ်များပေါ်ပေါက်လာတော့သည်။ ကျန်သူများကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း အတွဲကိုယ်စီနှင့်ဟိုပွတ်
အားနေသူဆိုလို့သူနဲ့ ဦးထွန်းထွန်းသာရှိသည်။အခြေအနေကို ရိပ်မိသော ဦးထွန်းထွန်းသည်
” ကဲ jပန် ကြရအောင်ဟေ.”ဆိုတော့ အားလုံး ဝိုင်းသိမ်းပြီးပြန်ကြတော.သည်။ ဆုမွန်က
” မမ , မမလည်း ရုံးမှာလိုက်အိပ်လေ “လို.ပြောတော. ရီဝေ က ” နင်တို.က အဖော်တွေနဲ.
ငါမလိုက်တော့ဘူး ” ပြောတော.ဦးထွန်းထွန်းက ပြာပြာသလဲပင်
” အာ. တယော က်တည်းမပြန်ပါနဲ.တော့ အန်ကယ် လည်းရှိတာပဲ “ဟု ရီရီဝေအားအဓိပါယ်
ရုံးရောက်တော့အားလုံးက မူးနေကြပြီး နေရာရှာကြတော့ ဦးထွန်းထွန်းကအကြံသမားပီပီ အခန်းက ၄ခန်းပဲ
ရှိတယ်ဟုပြောတော့ ဆုမွန်က ” မမ အပြင်မှာ အိပ်ပေးနော် ညီမတို.၃ တွဲအတွက်အခန်းတော.ပေး “
ဟု ပြောသဖြင်.ရီဝေ က ” နင်တို.တော်တော်ရွနေတယ်ဟုတ်လား..သွားပါ ရပါတယ် “ဟုပြောသည်။
ဦးထွန်းအတွက် အကွက်ဝင်လာပြီဖြစ်သည်။” ရီရီဝေက အန်ကယ်အခန်းမှာအိပ်လေ “ဟုပြောတော့
ရီဝေက ” ရပါတယ် အားနားစရာ” ဟုပြောတော.ဦးထွန်းထွန်းက ” ရပါတယ် ကျွန်တော်သောက်အုံးမှာ
အပြင်မှာပဲအိပ်တော.မယ်” လို.ပြောပြီး ရီဝေအား အခန်းလိုက်ပို.ပေးလိုက်သည်။ ခဏကြာတော့
ဆုမွန်တို့အခန်းမှ အသံများကြားနေရသည်။ လိုးသံများဖြစ်သည်။ ရီဝေ လည်းကြားနေရသည်။
လူက မူးနေပေမယ်.စိတ်ကတော.ခံချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်နေမိသည်။ ထိုစဉ် ဦးထွန်းထွန်းသည် အခန်းရှေ့
လာပြီး ” ဟိုဘက်ခန်းတွေကတော.ပွဲကြမ်းနေပြီ “ဟုပြောသည်။ ရီဝေက “အာ ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ”
ဟုပြောသည်။ဦးထွန်းထွန်းလည်း မူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရီဝေအားပြေးဖက်တော.သည်။ ရီဝေက
” ဘာလုပ် တာလဲ အော်လိုက်မှာနော် “ဟုပြောတော့ ဦးထွန်းထွန်းသည် တံခါးလော့အား ချလိုက်ပြီး
” အော်လေ အော်လိုက်လေ ဘယ်သူလာမလဲလို.ဟားဟား အားလုံးကပျော်နေကြပြီလေ
နင်.ကိုဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့ဘူး ဟားဟား ဟာဟားဟား “
ဒီတော့မှ ရီဝေလည်း စဉ်းစားမိသွားပြီး ” အန်ကယ် ရယ်မလုပ်ပါနဲ.နော်ညီမကအိမ်ထောင်နဲ.ပါ
မကောင်းပါဘူးလို့ ” ပြောသော အခါ ဦးထွန်းထွန်းက ” နင်က အိမ်ထောင်နဲ.လား ငါက
အပျို ထင်နေတာ,အိမ်ေ ထာင်သည်ဆိုတော.ပိုကောင်းတာပေါ.ဟာ ငါလည်းအိမ်ထောင်သည်ပါပဲ.
နင့်ယောကျာ်းက နင့်ကို ကောင်းကောင်းမလိုးပေးဘူလား. အကောင်းကြီးရှိသေးတယ်
နင့်ကို ငါလိုးပြမယ် နင်ကြိုက်သွားစေရမယ် ” ဟု ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောသည်။ ရီဝေလည်းဒီလူကြီး
” ဒါဆိုလည်း အန်ကယ်ကြီးဆန္ဒကို လိုက်ရောပါမယ် ဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ.”ဟုပြောတော.
” အေးပါဟာ မသိစေရပါဘူး..မြန်မြန်လုပ်မယ် ငါ တော်တော်တင်းနေပြီ “ဟုပြောလေသည်။
ရီဝေလည်းအကျီချွတ်မည်လည်းလုပ်ရော ဦးထွန်းထွန်းကအတင်းဆောင့်ဖြဲပြီး နို့အားအငမ်းမရစုတ်လေတငေမ
” အာ နင့်စောက်ပတ်ကြီးကလည်း အကြီးကြီးပါလား.. ကောင်းတယ်ဟာ .ငါကအဲဒါမျိုးတွေ.ချင်နေတာ “
” အန်ကယ် ရယ် ဖြေးဖြေး ဖြေးဖြေး “
” မရတော.ဘူးဟာ..ငါအရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ ငါ.လီးကိုကြည့်စမ်း “ဟု ဆိုကာ ပုဆိုးချွက်ချလိုက်လေသည်။
” ဟာ… ” ရီဝေ တော်တော်ပဲ အံ့သြသွားသည် ။ လီးကြီးမှာ ကြီမားလွန်းနေပြီးဒစ်ကြီးမှာပြဲလန်နေသည် ။
ဥများမှာလဲ တွဲကျနေပြီး အတော်ကြီးသည်။ သူ့ယောကျာ်းနှင့်တခြားဆီဖြစ်နေသော လီးကြီးအားတွေ.လိုက်ရခြင်းပင် ။ တောင်နေတာ ဓာတ်မီးလုံးလောက်ရှိသည်။
” အန်ကယ် ဒါ ဒါ ကြီးနဲ့ဖြစ်ပါ.မလား….ကျွန်မဟာလေးပြဲကွဲသွားအုံးမယ် “ဟုကြောက်လန့်တကြားပြောနေသည်။ ပါးစပ်ကသာ ပြောနေရသည် ရီဝေစိတ်ထဲတွင်တော့အရမ်းကြီးကျေနပ်နေသည်။
” အာ နင်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး နင်မခံဘူးတာကျနေတာပဲ နင့်ယောက်ကျားလီးနဲ.ဘယ်သူကကြီးလည်း”
” အန်ကယ်က ကြီးတာပေါ့ ဒီလောက်ကြီးတာ အခွေထဲမှာပဲမြင်ဘူးတာ “
” ခံကြည်.လေ နင်ကြိုက်သွားစေရမယ် ဟဲဟဲ.နင်က အိမ်ထောင်သည်ဆိုတော.စုပ်ဖူးမှာပေါ. ကဲ ငါ့ကို စုပ်ပေးစမ်း ….”
” အာ အန်ကယ် ကလည်း…”
” အန်ကယ်ကလည်း မလုပ်နဲ.စုပ်ပေးဆိုပြီး “သူလီးကြီးအား ရီဝေပါးစပ်နား တေ့ပေးတော့သည်။
ရီဝေလည်း စုပ်ချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာကာ လီးကြီးအား ငုံစုပ်လေတော.သည်။
” အား အား ကောင်းလိုက်တာရီဝေရာ စုပ် စုပ် ဒစ်ကိုလည်းလျက်ပေး ဥကိုပါ အား အား “
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အားရှီး
အား အားပြွတ် အားရှီး ပြွတ် ပြွတ်
ရီဝေလည်း စုပ်နေရင်း အန်ကယ်ကြီးအော်သံကြောင့် စိတ်ပါလာကာ ဥတွေပါစုပ်ပေးနေတော့သည်။
” အား အား အား ကောင်းတယ် ရီဝေရာ နင် လီးစုပ်တော်တော်ကျွမ်းတာပဲ စုပ် စုပ်..
အောက်ကိုဆင်း ဟုတ်ပြီ အား အား “
ရီဝေလည်း လီးစုပ်ရင်း ခံချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာကာ မရှက်တော့ပဲ ဦးထွန်းထွန်းဖင်ပေါက်ကိုပါ လျာနှင့်ရက်ပေးနေမိသည်။
” အား အား သေပါပြီ ရီဝေလေးရယ် အားအား လီးကိုပဲ စုပ်ပါတော. အားရှီး အား “
ပြွတ် ပြွတ် အား အား
ဦးထွန်းထွန်းသည် ရီဝေလီးစုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင်. မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သုတ်ရည်များရီဝေ ပါးစပ်ထဲသို့
” အား အား အား ပြီးပြီ အား “
ဦးထွန်းထွန်းပြီးတော့မည်ကို သိ၍ ရီဝေလီးကို ပါးစပ်ထဲမှ အမြန်ချွတ်သော်လည်း ဦးထွန်းထွန်းမှာ
ရီဝေခေါင်းကို အတင်းဖိကပ်ထားသောကြောင်းရုန်း၍မရပေ။ဦးထွန်းထွန်းသည် သုတ်ရည်များ
တစ်စက်မကျန် ရီဝေပါးစပ်ထည်း ပန်းထည့်ပြီး ခေါင်းအားလွတ်ပေးလိုက်ပြီး ရီဝေအားကြည့်ကာ သူ့လရည်များအား မျိုချခိုင်းနေသည်။ ရီဝေလည်း အစက နံ၍ ထွေးထုပ်မည် စဉ်းစားထားသော်လည်း ဦးထွန်းထွန်း
လီးကြီးအားမြင်ကာ ဖီးတက်လာပြီးအားလုံး မျိုချလိုက်လေသည်။မျိုချတော့လည်းအရသာတစ်မျိုးကောင်းနေပြန်သည်။
ဦးထွန်းထွန်းကတော့ သူ့အရည်များကို မျိုချနေသော ရီဝေအားကြည့်ကာ ကျေနပ်နေတော့သည်။
“ကောင်းလိုက်တာ ရီဝေရာ နင်တော်တော်စုပ်တတ်တာပဲ, “
” အာ..အန်ကယ် ကလဲ…”
” အန်ကယ် ကလဲ လုပ်မနေနဲ့ပြန်တောင်လာအောင်လုပ်ပေးအုံး .. နင်.ကို အပီလိုးတော.မယ် “
ရီဝေလည်းထိုင်ရာမှထကာ ဦးထွန်းထွန်းလီးကြီးအား လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးကွင်းတိုက်ပေးနေတော့သည်။
” အန်ကယ့်လီးက တော်တော်ကြီးတာပဲနော် ဆေးထိုးထားတာလား “
” အေး ပေါ့ဟ နင်မကြိုက်ဘူးလား ငါ.လီးကို “
” မသိဘူး …”
” မသိလို.ပဲ လရည်တောင်မျိုပြီးနေပြီ ဟားဟား ဟားဟား “
အလိုးခံချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာကာ လီးကြီးအား ငုံစုပ်လိုက်ပါတော့သညိ။
” အား အား ပြွတ် ပြွတ် အား အား “
ဦးထွန်းထွန်းသည် ရီဝေ စုပ်ပေးမူကြောင့် ခံစားလို့ ကောင်းနေသော်လည်း ဒီတခါတော့အဖုတ်အား
အပြီအပြင်လိုးချင်သောကြောင့်” တော်ပြီ တော်ပြီ နင့်ကို ငါလိုးတော့မယ် ပက်လက်လှန်ပေး
” အန်ကယ် ဖြေးဖြေးနော် အရမ်းကြီးတော့ နာမှာစိုးလို.”ဟုပြောကာ ဦးထွန်းထွန်းလီးကြီးအားကိုင်ကာ အဖုတ်ဝတွင်တေ့ပေးလိုက်သည်။ ဦးထွန်းထွန်းလည်း လီးကြီးကို ရီဝေအဖုတ်ထဲသို.ဖြေးဖြေးခြင်းထိုးသွင်း
” အား နာတယ် အန်ကယ် အား အား ဖြေးဖြေး “
” နင်ကလည်း ဒစ်ပဲဝင်သေးတယ်ဟ နင်အဖုတ်ကလဲ အိမ်ထောင်သည်သာပြောတယ်ကျပ်နေတာပဲ
ကောင်းလိုက်တာရီဝေရာ နင့်ယောကျာ်းမလိုးဘူလား နင့်ကို “
” လိုးပါတယ် အား အား အား သေပါပြီ “
ရီဝေလည်း စကားသာပြောနေရသည် အဆမတန် ကြီးမားသော လီးပြီးထိုးသွင်းမှုကြောင့် နာကျင်
နေလေသည်။လီးကြီးတဝက်လည်း ဝင်သွားရော ဦးထွန်းထွန်းသည် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ
” ဗြစ် ဗြစ် ဒုတ် အား အား အားသေပါပြီ ရှင် အား အားပြဲပါပြီ “
လီးကြီးမှာ အဆုံးဝင်သွားပြီး အဖုတ်အောက်ပိုင်းမှာ နဲနဲကွဲသွားလေတော့သည်။
” အား အန်ကယ် အား ကွဲ..ကွဲသွားပြီလားမသိဘူး အရမ်းစပ်နေတယ် “
ရီဝေပြောသော်လည်း ဦးထွန်းထွန်းအဆောင့်မရပ်ပဲ အသားကုန်ဆောင့်လိုးနေတော.သည်။
” ပြွတ် ဖွတ် စွပ် စွပ် စွပ် ပြွတ် ပြွတ် ဖွတ်ွပ် ဖွတ် စွပ် အား အား အား “
လီးမှာလည်း အဝင်အထွက်မှန်လာပြီး ဦးထွန်းထွန်းဆောင့်ချက်များကလည်းပြင်းထန်အားပါသောကြောင့်
ရီဝေမှာ နာတာပျောက်လာပြီး ခံစားမှုများ ကောင်းလာတော့သည်။
“အား အား ကောင်းလာပြီ အန်ကယ် အား အား အား လား သေပါပြီ “
ဦးထွန်းထွန်းလည်း ရီဝေက ကောင်းလာပြီပြောတော့ စိတ်ပါလာပြီး အသားကုန်ပင် ဆောင့်လိုးနေပါသည်။
” ပြွတ် . ဒုတ် အင်. အား အား ပြွတ် စွပ် စွပ် ဖတ် ဖတ် အား အား”
အချက်၄၀ခန့်ဆောင့်လိုးပြီးသောအခါ ဦးထွန်းထွန်းသည် မောလာသဖြင့် လီးကြီးအားချွတ်လိုက်ရာ
” အာ အန်ကယ် ကလည်း ဘာလို.ချွတ်လိုက်တာလည်း ဒီမှာကောင်းနေပြီကို,”
” ငါမောလို့ဟ နင်အပေါ်က တက်ဆောင့် ပေး “
ဦးထွန်းထွန်းလည်း ခဏချွတ်တာကို မနေနိုင်သော ရီဝေဧ၊် ကာမစိတ်ထကြွမှုကို သတိထားမိပြီး နောက်လည်း အမြဲလိုးရတော့မည်မှန်း သိ၍ ကျေနပ်နေတော့သည် ။
ဦးထွန်းထွန်းလည်း ရီဝေအပေါ်မှဆင်းပြီး အောက်တွင်ထိုင်ကာသူလီးကြီးအားထောင်ပေးလိုက်သည်။ရီဝေကလည်းအလိုက်သင့်ပင်
” အား ရှီး ကျွတ် ကျွတ် အား .အဖုတ်ထဲမှာပြည့် ကြပ်နေတာပဲ ကောင်းလိုက်တာအန်ကယ်ရာ”
” အင်း ဆောင့် ဆောင့် မြန် မြန်ဆောင့် ရီ ဝေ အား အား အား “
” ပြွတ် စွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် အင်.အား ….အား အားလား ပြွတ် ပြွတ် “
ရီဝေလည်း စိတ်ထပြီး အသားကုန်ဆောင့်ပေးနေပါသည်။အဖုတ်ကြီးမှာလဲ ကြီးမားသော လီးကြီးကြောင့်
အတော်ပင်ကျယ်နေတော့ပါသည်။ ဦးထွန်းထွန်းသည် ချောမောလှပသော ကောင်မလေးတယောက်အား
စိတ်ရှိလက်ရှိလိုးနေရသဖြင့် ကျေနပ်ကာ ပြီးချင်သလိုဖြစ်လာ၍ အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်ပေးနေ
” အား အားပြီးတော့မယ် ဆောင့် ဆောင့်ဆောင့် ရီဝေ. အား အား “
ရီဝေလည်း ဆောင့်ပေးနေရင်းနှင့် လက်တဖက်က ဦးထွန်းထွန်းဥအားကိုင်ပေးလိုက်ရာ
ဦးထွန်းထွန်းမှာ အရမ်းကောင်းသွားပြီး သုတ်ရည်များ ရီဝေ အဖုတ်ထည်းပန်းထည့်လိုက်လေတော့သည် ။
” အား အား အီး အီး အား အား အားပြီး ပြီး အား “
ဦးထွန်းထွန်းလည်းရီဝေအဖုတ်ထဲအရည်များပန်းထည့်ပြီးနောက် လီးကြီးအားအဖုတ်မှချွတ်လိုက်ရာသုတ်ရည်များ ဝေါကနဲ စီးကျလာတော့သည်။
“အန်ကယ့် အရည်တွေက အများကြီးပဲနော်… “
” အင်းပေါ.ဟ နင့်စောက်ပတ်က လုပ်လို့ကောင်းလိုက် တာဟာ, ငါတော့ နင်ကိုကြိုက်သွားပြီ
” ညီမလည်း အန်ကယ်ကြီးကို သဘောကျပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုလို ဖြစ်သွားတာကိုတော့ ဘယ်သူ့မှ
” အေးပါ စိတ်ချပါ မပြောပါဘူး ဒါပေမယ့် ငါ့ကိုတော့ ၁ပတ် ၁ခါပေးလိုးနော် အဲ့ဒါဆို မပြောဘူး “
” အန်ကယ်ကကလည်း ၁ပတ် ၁ခါ မများဘူးလား “
” မများပါဘူးဟ ငါက နင့်ဖင်ကြီးပြုတ်သွားအောင် လိုးပေးချင်တာ “
” ကဲ ပြန်စကြစို့…”
” ဟာ တောင်လာပြန်ပြီလား “
” အေးဟုတ်တယ် မရတော့ဘူး “ဆိုပြီး ဦးထွန်းထွန်းသည် ရီဝေအား လိုးပြန်တော့သည်။ ထိုညက ဦးထွန်းထွန်းသည် ရီဝေအား ပုံစံပေါင်းစုံဖြင့် လိုးပေးကာ ၅ချီအထိ လိုးလိုက်လေသည်။ ရီဝေလည်း
မျော့မျော့ပဲကျန်ကာ မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။မနက်ကျတော့ဦးထွန်းထွန်းမှာ
အစောကြီးနိုးနေပြီး ဧည်ခန်း၌ ထိုင်နေစဉ် သီဟ ရောက်လာပြီး” အန်ကယ် ok လား ညက “ဟု ပြုံးဖြီးဖြီး
” ပြေတာပေါ.ညီလေးရာ …ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဟားဟား “
” ဟုတ်လား အန်ကယ်က ကံကောင်းတယ်ဗျာ အဲဒီ ဆော်ကြီးက မိုက်တယ် “
” အေးကွ တကယ် လိုးလို့ကောင်းတယ် သူ့ယောကျာ်း မလိုးဘူးလားမသိဘူးဟ “
” ဟုတ်လား အန်ကယ်ရ ကျွန်တော့်ကိုလည်း လုပ်ရအောင်ကူညီပါအုံး “
” လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဟ ဒါပေမယ့် စိတ်တော့တော်တော် ကြီးတယ်ဟ
” အင်း ကူညီပါအန်ကယ်ရာ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီဆော်ကြီးကို လိုးချင်နေပြီဗျ “
” အေးပါ ဟ ရရင်ကူညီပါ့မယ် …. အခုတော့ငါ ဝအောင်လိုးအုံးမယ် “
” အာ အန်ကယ်က လူလည်ကြီးပဲ “
” ဟားဟား ဟားဟား “
ထိုစဉ် ရီရီဝေလည်း ကွတကွဖြင့် အပြင်ထွက်လာသဖြင့် စကားစပြတ်သွားကြပြီး ရီဝေက ပြန်အုံးမယ်
ရီဝေက ” ပြန်အုံးမယ် အန်ကယ်နဲ.မောင်လေး “ဟု ပြောတော့ သီဟက ” ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ အဆင်ပြေလား “
ဟု အဓိပ္ပါယ် ပါပါပြောလိုက်တော့ ရီဝေလည်း ရှက်သွားပြီး ” အင်း ပြေပါတယ် “ဟု ပြောတော့ ဦးထွန်းထွန်း က ” ရှက်မနေနဲ.့အားလုံးပြောပြီးသွားပြီ “
” အာ အန်ကယ်ကလည်း ဘာတွေလျောက်ပြောနေလဲမသိဘူး ” ဟုပြောလေသည်။ သီဟက
” အစ်မ ကလည်း ရပါတယ် ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ နားလည်ပါတယ် “ဟုပြောတော့မှ ရီဝေလည်း အဆင်ပြေသွားပြီး ” ကျေးဇူးပါ ငါ့မောင်ရယ် “ဟုပြောသဖြင်. သီဟက” ကျေးဇူးက ဒီအတိုင်း ဘယ်ရမလဲ အစ်မ ရ “
” ပြောလေ ငါ.မောင်ကိုဘာဝယ်ကျွေးရမလဲ “…..” တကယ်လားအစ်မ “
ရီဝေ စကားမှားသွားမှန်း သိသွားလေသည်။ကိုယ်က မုန့်ဝယ်ကျွေးမည်ဟု ပြောတာကို သီဟက လိုရာ ဆွဲ တွေးနေတော့သည်။ ဦးထွန်းထွန်းကလည်း ” ကျွေးလိုက်ပါဟာ ကလေးကို ဟားဟား ဟားဟား “
သီဟကလည်း” မမတကယ်ကျွေးမှာလား “ဟုပြောတော့ ရီဝေလည်း ” မသိဘူး “ဟုပြောလိုက်လေသည်။
” လုပ်ပါအစ်မရယ် ခဏလေးပါပဲ ” ဟုပြောကာ ရီဝေနားတိုးလာလေသည်။
ရီဝေက” မရပါဘူး “ဟုပြောတော. ဦးထွန်းထွန်း က” ခဏလေးပဲဟာ ကူညီလိုက်စမ်းပါ သွားသွား ငါ.အခန်းထဲသွား “ဟု သီဟအား မျက်စိမှိတ်ပြကာ အတင်းတွန်းလွတ်နေတော့သည်။
ရီဝေလည်း မှားပြီဟု စိတ်ထဲတွေးမိသော်လည်း မလိုက်လျောပြန်လျင်လည်း
မလိုက်လျောပြန်လျင်လည်း လျောက်ပြောနေမည်စိုး၍ သီဟခေါ်ဆောင်ရာနောက်သို့ပါလာခဲ့လေတော့သည်။
ရီဝေလည်း ၁ရက်အတွင်း သူစီမ်း ယောင်္ကျားနှစ်ယောက်ဧ။် အလိုးခံရမှုကို စဉ်းစားရင်း မိမိခင်ပွန်းအပေါ်
သစ္စာမဲ့သလိုများဖြစ်နေပြီလားဟု တွေးမိသော်လည်းသီဟဧ။် ကိုင်တွယ်မှုကြောင့်ကာမစိတ်များပြန်လည်ထကြွလာပါတော့သည်။ သီဟလည်း ရီဝေ စိတ်မပြောင်းခင် နို.ကြီးများအား ပွတ်သတ်နေပြီးလက်တဖက်က
ရီဝေအဖုတ်ကြီအား ကလိနေပါတော့သည်။ ရီဝေလည်း ကာမစိတ်များ ထကြွလာကာ သီဟဧ။်လီးအား
ဖမ်းကိုင်လိုက်သောအခါ သီဟလည်း အလိုက်တသိပင် ဘောင်းဘီအားချွတ်ပေးလိုက်ကာ ရီဝေခေါင်းအား
ဖိချကာ မျက်နှာအား သူလီးနားတေ့ပေးလိုက်လေသည်။ ရီဝေလည်း သီဟဧ။်လီးကြီးမျက်နှာနားသို့
ရောက်သည်နှင့် ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ လီးကြီးအားငုံစုပ် လိုက်ပါတော့သည်။ သီဟလီးမှာ ဦးထွန်းထွန်း
လီးလောက် မကြီးသော်လည်း အရှည်မှာ ၇လက်မ ကျော်သဖြင့်ရီဝေတယောက် ရင်တုန်နေသလို
ဟင်း ဟင်း ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အင်း ပြွတ် ပြွတ် ရီဝေလည်းလီးကြီးကို အရသာခံစုပ်နေပါသည်။
သီဟကတော့ မျက်စိ မှိတ်ကာ ဇိမ်ခံနေပါသည်။ထို့နောက် ရီဝေလည်း စော်ဖုတ်ရည်များရွဲလာပြီး မနေနိုင်တော့ပဲ လီးစုပ်ခြင်းကိုရပ်ကာ
” ကဲ မောင်လေး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ” သီဟက ” အစ်မကုန်းပေးမှစောတ်ဖုတ်က ပြူးပြီးလိုးရတာ
ပိုအားရမှာ….” ရီဝေလည်း ကြမ်းပြင်ပေါ် လေးဘက်ထောက် ကုန်းပေးလိုက်သည်။သီဟလည်း
ရီဝေ့ အနောက်မှခွ၍ စောက်ခေါင်းဝတွင်လီးကြီးကိုတေ့ကာ ဖြည်းဖြည် ချင်းသွင်းထည့်လိုက်ပါသည်။
ရီဝေ လည်းလီးကြီးဝင်လာပြီဖြစ်၍ အရသာတွေ့ကာ မျက်တောင်စင်းခံနေပါသည်။
” ဟင်း ဟင်း အင်. ..အင်. အ ဗွတ် ဗွတ် စွတ် အင့်အင့် အဟင် အ အ “
” အ အ အမလေး မောင်လေးရယ် အင့်အင့် သေပါပြီ အားအင့်အင့် “
ရီဝေမှာ လီးကြီးမှာ ရှည်လွန်းသဖြင့် နာလည်းနာ ခံစားရင်း ဖင်ကြီးကို ထောင်ကာ အလိုးခံနေပါသည်။
” ဟင်.ဟင်. ဗွတ်ဗွတ် ဘွတ် ဘွတ် အ အအင် ဟင် .ဟင် “
သီဟလည်း ရီဝေအား အချက်၃၀ခန့် ဖင်ထောင်လိုးပြီး ညောင်းလာသဖြင်.
” ကဲ အစ်မ ပုံစံပြောင်းရအောင်နော် ” ဟုဆိုကာသူ.လီးကြီးကို ရီဝေစောက်ဖုတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
” အစ်မ အပေါ်က တက်ဆောင့်ပေးလေ လာ “
ရီဝေလည်း သီဟလီးကြီးပေါ်သို့ထိုင်ချရင်း “ဟင့် ဟင့် အ အ အင်းအားဗျွတ် ဗျွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဟင် အင့်
အ အ အို အားလား ” ဆက်ကာ ဆက်ကာ ညှောင့်နေရင်း ” ဖျွတ် ဖျွတ်ဘွတ် ဘွက် ဖွတ် ဖွတ် အိုး မောင်လေးရာ “
” အင့် အင့် ဟင့် ဟင့် အအ ဟင်း ” “….မမပြီးသွားပြီ မောင်လေးရော “ဟုပြောလိုက်ရာ
သီဟလည်း ပြီးခါနီးပြီ ဖြစ်၍ ဘာမှမပြောတော့ပဲ ရီဝေအား ကိုယ်ပေါ်မှလှဲချကာ မျက်နှာပေါ်တက်ခွကာ
ရီဝေဧ၊် ပါးစပ်ကို တက်လိုးနေပါတော့သည်။
” ပလွတ် ပလွတ် ပျွတ် အု အု အင်း အု အု ပလွှတ် ပျွှတ် စွပ်စွပ် အုအု ” အချက် ၂၀ခန့်ရီဝေပါးစပ်ထဲ
လိုးပြီးသောအခါ သီဟလည်း လရည်များပန်းထုတ်လိုက်ပါသည်။ ရီဝေလည်း မထွေးထုပ်ပဲ မျိုချလိုက်ပါတော့သည်။
သီဟ က ကောင်းလိုက်တာရီဝေရာ ကောင်းလိုက်တာ
ထိုစဉ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်လာပြီး ဟားဟား တော်တော်ကောင်းနေကြတယ်ပေါ.ဟုပြောလေသည်။
ငီဟက ဟုတ်တယ် အန်ကယ် ဟု ပြော ကာ သူလီးကြီးအားရေသွားဆေးလေသည်။
ရီဝေလည်းသန် ရှင်းရေးလုပ်ကာ အိမ်သို.taxi ငှါးပြီးပြန်ခဲ.လေသည်။
ရီဝေလည်း အိမ်ရောက်သည်နှင့် အခန်းတွင်းပြေးဝင်ကာ ကုတင်ပေါ်လှဲချပြီး အနားယူနေသည်။
ရီဝေအဖုတ်မှာလည်းလီးကြီး၂ချောင်းနှင့် အလိုးခံထားရသဖြင့် ကျိန်းပြီးစပ်နေတော့သည်။
ရီဝေလည်း မနေ့ကအဖြစ်အပျက်ကို တွေးရင်း ကိုယ့်ကို ကိုယ် အံသြမိနေသည်။မထင်မှတ်ပဲ
သူစိမ်း ၂ယောက်ဧ။်အလိုးခံလိုက်ရသည့်အပြင် သူတို့ဧ။် အရည်များကိုပင်မျိုချခဲ့လေသည်။
မိမိယောက်ကျာ်းကိုပင် မလုပ်ပေးဘူးသော အရာကို သူစိမ်းများအား လုပ်ပေးမိလေသည်။
ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားတိုင်း အဖြေမရပေ။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားသည် က သူတို့ဧ။် လီးကြီးများပင်ဖြစ်လေသည်။
မိမိယောကျာ်းထက် ပိုမို ကြီးမားပြီးသုတ်ထွက်အားလည်း အလွန်ကောင်းကျသည်။ မိမိအမျိုးသားနှင့်
မရခဲ့သော ကာမအရသာများလည်း ရရှိခဲ့သည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုမှာလည်း အပြည့်ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားမိသည်က သူသည် လီးကြီး ကြီးများကို စွဲလမ်းသွားတာပဲဖြစ်သည်။ဒီလီးကြီးမျိုးနှင့်တောင်
အရသာ ထူးခြားနေလျှင် နိင်ငံခြားလူမျိူးများဧ။် လီးကြီးများနှင့်ဆိုလျင် မည်မျှအရသာ ရှိမည်ဆိုတာကို
တွေးတောရင်း အဖုတ်ထဲမှယားယံ လာပါသည်။ ရီဝေ တစ်ယောက်တော့ဆားငန်ရေ သောက်မိသလို ပဲ
ရခဲ့လေသည်။သူတို.နှင့်တောင် ဒီလောက်အရသာ ကောင်းလျှင် ရုပ်ရှင်ထဲမှနိုင်ငံခြားသား များ
ရီဝေလည်းစဉ်းစားနေရင်းနှင့် ကာမစိတ်များ ထကြွလာပါသည်။
ထိုစဉ် အိမ်ရှေ့မှ တံခါးဖွင်သံကြား၍ ကြည့်လိုက်ရာ ရီဝေ ယောကျာ်းကျော်ကျော် ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ရီဝေလည်း ” မောင်ပြန်လာပြီလား ” ဟုပြောပြီး ကျော်ကျော်အား ဆီးကြို လေသည်။
” အင်း ဟုတ်တယ် ခရီးသွား စရာရှိလို့ ခဏပြန်လာတာမိန်းမရော ရောက်နေတာကြာပြီလား …”
” ကြာပြီ မနက်ထဲကပြန်ရောက်တာ …ခရီးက ကြာမှာလား “
” မကြာပါဘူး ၁ပတ်လောက်ထဲပါ….”
” ရီဝေ ၁ယောက်တည်းပျင်းနေတော့မှာပဲ “
” ခဏလေးပါပဲ မိန်းမရာ..”
” အင်းပါ ရပါတယ် “
” ကဲ ခရီးမသွားခင်လေး ဟဲ ဟဲ” ဟုပြောကာ ရီဝေ အကျီ်အား ချွတ် လေသည်။ရီဝေလည်းအလိုက်သင့်ပင် ချွတ်ပေးကာ ကျော်ကျော်ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်လေသည်။ကျော်ကျော်ဧ။်လီးမှာ ဦးထွန်းထွန်းလီးနှင့်
အကွာကြီး ကွာနေသည်။သို့သော်လည်း ယောက်ျားကျေနပ်စေရန် လီးအား ငုံစုပ်ပေးလိုက်သည်။
” အိုး ကောင်းလိုက်တာ ရီဝေရယ် “
ရီဝေလည်း ဒစ်ကိုငုံထားရင်း ထိပ်ဝကို လျာနဲ့ထိုးပေးနေသည်။ကျော်ကျော်လည်း မိန်းမဖြစ်သူ လီးစုပ်ပေးတာကို ခံစားရင်း အရသာခံနေသည်။ကျော်ကျော်လည်း ရီဝေစော်ဖုတ်ကို ပွတ်ပေးနေရင်း
ကလိနေလေသည်။ ရီဝေစောက်ဖုတ်မှာ အရည်များရွဲနေတော့ ကျော်ကျော်က မိန်းမစိတ်ပါနေပြီလားဟု
မေးတော့ ရီဝေ က အင်း ဟုပြောလေသည်။ဒါဆိုလုပ်ရအောင် ဆိုပြီး ရီဝေကို ကုတင်ပေါ်ပွေ့တင်ပြီး
ခြေထောက်ကို ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ကာ လီးကိုကိုင်ပြီး ဒစ်ကို ဖိပြီးထည့်လိုက်လေသည်။စောက်ဖုတ်က
အရည်ထွက်နေတော့ လျောကနဲ ဝင်သွားသည်။ကျော်ကျော်လည်း စိတ်ထဲမှာရီဝေကိုလိုးရတာ
” မိန်းမ. အဖုတ်ကချောင်နေသလိုပဲ ” ရီဝေလည်း ပြာပြာသလဲပင် “မဟုတ်ပါဘူး မောင်ထင်လို့ပါကွာ” ဟု လျောက်ပြောနေသည်။ စိတ်ထဲတွင်တော့ ချောင်နေမှာပေါ့ လီးအကြီးကြီးနဲ့လိုးထားတာ ဟုပြောနေ
မိသည်။ ကျော်ကျော်လည်း မရိပ်မိပဲ လီးကို အပြင်မထုတ်ပဲ ဖြေးဖြေးချင်း အဆုံးထိရောက်အောင်
” မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ အား အား “
” အင့် အင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ်အင.အင်.အားဖတ်ဖတ် “
ကျော်ကျေ်ာလည်း ပုခံးနှစ်ဘက်ကို ခပ်တင်းတင်းကုန်းဆွဲကာ အားပြင်းပြင်းနှင့်ဆောင့်လိုး လေတော့သည်။
ဆောင့်ချက်များက မြန်လာလေသည်။ ဘွပ် ဘွပ် အား အား ဖတ် ဖတ် ပြွတ် အားအီး
အချက်၃၀ခန့် ကြာတော့ ကျော်ကျော်လည်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲအပြီးသတ် ဆောင့်.လိုးပေးလိုက်
လေတော့သည်။ရီဝေ အဖုတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်များ ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။
ကျော်ကျော်လည်းရီ ရီဝေအဖုတ်ထဲသို.အရည်များပန်းထုတ်ပြီးနောက် ကိုယ်ပေါ်မှဆင်းကာ ရေအြမ်န်ချိုးပြီးခရီးသွားဖို. ပြင် ဆင်ပါတော.သည်။ ရီဝေကတော.မပြီးသေး၍စိတ်ပျက်ကာ အိပ်ပျော်သွားပါတော.သည်။
၂ရက်လောက်ကြာတော. ဦးထွန်းထွန်း စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်လာပြန်လေပြီ။ လီးကလည်းအစာ တောင်းနေသူ ပမာ တောင်မတ်နေဧ။်
ရီဝေဆီဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်လို.မလာလျင် ခက်ပေအုံးမည်။ ဒီတစ်ခါ လိုးလို.ရရင်တော.နောက်အမြဲလိုးရအောင် အကြပ်ကိုင်ဖို.စဉ်းစားနေတုန်း သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ၃၇လမ်း မှ ကုလားဇော်ထက် အားသတိရသွားသည်။ ဒီကောင်က အဲဒီကိစ္စတွေမှာ ကျွမ်းကျင်သည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်းအချိန်ဆွဲမနေတော.ပဲဇော်ထက် ဆီသို. ထွက်ခဲ.လေသည်။
အဆင်သင့် ပဲဇော်ထက်ကို သူအိမ်၌တွေ.ရဧ။် “ဟေ.ကောင် ထွန်းထွန်းမတွေ.ရတာကြာပြီ ဘယ်ပျောက်နေလဲဟု ဇော်ထက်က ပြောလေသည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်းအေးကွ အကူအ ညီတောင်းစရာရှိလို.ကွ
ဦးထွန်းထွန်း လည်း သူနှင်. ရီဝေ အကြောင်း သီဟနှင်.ဖြစ်သမျှ အားလုံးကို ပြော ပြ ကာနောက် အမြဲချလို.ရရန် အကြံတောင်းလေသည်။
ဇော်ထက်လည်း အဲဒါက အေးဆေး ပါ အဓိက က ဆော်လေး ကမိုက်လား
ဟုတ်ပြီဒါဆို ငါကူညီမယ် ငါ.သူငယ်ချင်း ၁ယောက်ဆီမှာ ပြဒါး နဲ.လုပ်ထားတဲ.အခန်းရှိတယ် ။ သူ က အပြင်ကဇပဲမြင်ရတယ် အထဲက အပြပ
အပြင်ကို မမြင်ရဘူး, မင်းတို.အေးဆေးလုပ်ကြ ငါက အပြင်က videoရိုက်ပေးမယ်။ videoရရင် အိုကေပြီပေါ. အကြပ်ကိုင်လို.ရပြီပေါ.
နိုးနိုး ကျေးဇူး အလကားမတင်နဲ. ငါတို.ကိုလည်းဝေစုပေးရမှာ
အေးပါကွာ အေးပါ ရပါတယ်ဟ. ဒါဆိုမင်း အခန်းအသင့်ပြင်ထား ငါခေါ်ပြီးလာခဲမယ်ဟုပြောကာ ထွက်သွားလေတော.သည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်းရီဝေဆီဖုန်းဆက်ကာတွေ.ကြမယ်ဟုပြောတော. ရီဝေကမသွားတော.ဘူးဟုပြောနေသဖြင်. ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပါဟု
ဦးထွန်းထွန်း လည်းရီဝေအား ဇော်ထက်အခန်းသို.ခေါ်လာပြီး အခန်းထဲသို.ရောက်သည်နှင်.
ရီဝေကို ဖက်ရင်း နှုနှုနှုတ်ခ မ်းကို စုပ်နမ်းကာ လက်ကလည်း ရီဝေဧ၊် ကားစွင်. သော ဖင်ကြီး ကို နယ်ရင်း ဖင်ကြား စအို ဝကို ကလိပေးလိုက်သည်။
ရီဝေလည်း စောက်ပတ်ကို လီးကြီးလာထောက်ကာ ဖင်ဝကိုလည်း ကလိခံနေရတာ မို.ဖီးတက်ကာ ဖင်ကို ကော.လိုက် ကောက်လိုက်နှင်.ခါရမ်းနေပါသည်။
မှန်ခန်းအပြင်က Video ရိုက်နေသူ ဇော်ထက်က လည်း ရီဝေနှင်. ဦးထွန်းထွန်းဘယ်လို
လိုးကြမည်ဆိုတာ စောင်.နေရင်းပြီးရင်တော.အဲဒီဆော်လေးကို ရအောင်လိုးရမည်ဟု တွေးကာ ရီဝေအားလိုးချင်သူများနေပါသည်။
ရီဝေလည်း လီးကြီးကိုကိုင်ကာဂွင်းတိုက်ပေးနေရင်း အရမ်းကြီးလွန်းတာမို. လန်.နေလေသည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်း ခုံ ပေါတွင် ထိုင်လိုက်ပြီး ရီဝေအားကြမ်းပြင်တွင် ဒူးထောက်စေကာ သူ၏လီးကြီးအား စုပ်ခိုင်းပါတော.သည်။
ပျွတ် ပျွတ် ပပလွတ် ပလပ် ပလွတ် အု အု အင်း ပျွတ် အသံမည်အောင်အားရပါးရ ရီဝေလည်းစုပ်ပေးနေပါတော.သည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်း ရီဝေ လီးစုပ်ပေတာကို ဇိမ်ခံရင်း လိုးရန် ရီဝေအားထူလိုက်ပြီး ရီဝေ ဒီနေ. တမျိုးပြောင်းလိုးရအောင် နော်
ရီဝေ က ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဟုမေးတော.
ဒီလိုလေ ရီဝေလည်းတစ်ခါမှမခံဘူးတဲ. ဖင်ကိုလိုးချင်လို. လေ
ဟာ မရပါဘူး အရမ်းနာမှာ . မနာပါဘူးကွာ ခဏလေးပါ နာရင် မလုပ်ဘူးလေ
ရီဝေလည်း ဖင်ဝ ကို လက်နဲ.ကလိထဲက ဖီးတက်ပြီးခံချင်နေပေမယ်.နာမှားစိုးရိမ်နေလေသည်။
ဦးထွန်းထွန်းက ဆီဆီဘူးလေးအားပြပြီး ဒါလေးရီဝေဖင်ဝမှာလိမ်းပြီးလိုးရင်
မနာ ပါဘူး နာတော.လည်းမလုပ်ဘူးလေ
ဦးထွန်းထွန်းသည် ရီရီဝေ ဟိုဘက်လှည်.ဟုပြောကာ ရီဝေဖင်ဝတွင် ဆီရွဲရွှဲ လူးပြီး
ဖင်ထဲကိုကလိပေးလိုက်ရာ ရီဝေလည်း စိတ်ပါလာလေတော.သည်။
ရီဝေလည်းကုန်းပေးထားသဖြင်. ဦးထွန်၆လည်း ဆီနဲနဲကို ဒစ် ထိပ်တွင်သုတ်ပြီး
ရီဝေဖင်အား ဖြဲကာ လီးကို ဖင်ဝသို. တေ.ကာ သွင်းလိုက်လေသည်။
“အင်း ဟင်းဟင်း အ အ ဖြည်းဖြည် နော် အို အို အ အင်. .အင်. အဟင့်.
အ အီး အားလား စွတ် စွတ် ဖပ်ဖပ်
ဦးထွန်းထွန်း လည်း ပုံမှန် အသွင်းအထုပ်လုပ်နေရာ ဒစ်ကတော ဝင်သွားပြီး ဖြစ်သည်။
စွတ်စွတိပျွတ်အျွတ်ပျွတ် အအ အားအားအုအု လီးကြီးမှာ ရီဝေဖင်ထဲသို.မဆန်.မပြဲဝင်နေရာ တဝက် ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ရီဝေလည်း အစက နာ သော်လည်း တဝက်လောက်ရောက်တော. အရသာ တမျိုးဖြစ်လာလေသည်။
အား ကောင်းလိုက်တဲာ. ဖင်ကွာ စီးနေတာပဲ
ဦးထွန်းထွန်း လည်း ရီဝေ၏ ဖင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို လိုးရတာမို. အရသာ. တွေ.ကာ တဆုံးစောင်.ထည်.လိုက်ပါတော.ငည်။
ဘျွိ ဘျွိ ဗျွိ ဇီ ဇိ အား အားသေပါပြီး အန်ကယ်ရရယ် အား ဘား အားလား
အိ အိ အာ အာ အန်ကယ်လီးက ဖင်ခေါင်းထဲပြည်.နြေပြီ အား အျ အိအွင်.
အွင်. အားလား သေပါပြီ
ရီဝေလည်း ဖင်ခေါင်းထဲ လီးကြီး ပြည်.ကျပ်ကာ ဝင်ထွက် လိုးနေတာ ကျေနပ်အားရကာ ဖင်ကြီးကိုထောင်ပေးနေပါတော.သည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်း အရှိန်တက်ကာ ပို၍ ဆောင်.ဆောင်.လိုးနေပါသည်။ အချက် ၃၀ခန်.ဆောင်းပေးပြီးသောအခါ မအောင့်နိုင်တော.ပဲ ရီဝေ၏ ဖင်ခေါင်းထဲ သုတ်ရည်များ ပန်းထည်ရင်း ပြီးသွားပါတော.သည်၊
အအန်ကယ် လုပ်တာနဲ. ကျမ ဖင် လေးတော.ကွဲပါပြီဟုရီဝေကပြောနေပါတော.ငည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်း ရီဝေဖင်ထဲမှသူလီးကြီးအား ဆွဲထုတ်လိုက်ရာ
ဘွတ် ရှူး ပွတ် ပွတ် ပွတ် လီးကြီးထွက်လာမှုနှင်.အတူ အတွင်းမှသုတ်ရည်များပါ အပြင်ကို စီးကျလာလေတော.သည်။
အား ကောင်းလိုက်တာရီဝေရာ နင်.ဖင်ကိုလိုးရတာ အား
နင်ရော ကောင်းလား ..ကောင်းတယ်အန်ကယ် အစကတော.နာတယ်နောက်တော.ကောင်းလာရော
ဟားဟား ငါပြောသားပဲ ကောင်းရ ပါစေလိမ်.မယ်လို.
နင်.ကို မေးရအုံးမယ် နင် အရင်က ဘယ် သူတွေနဲ.လိုးဖူးလဲ
ငါ နဲ.မတွေ.ခင်ကလေ .. အန်ကယ်နဲ.မတွေ.ခင် ၂ယောက်တော.ကြုံဘူးပါတယ်
အခု ယောကျာ်းရယ် သူနဲ.မရခင် က ၁ယောက်ရယ်ပေါ.
အေး အဲဒါကြောင်.ထင်တယ် နင်.စောက်ဖုတ်ကအရမ်းမကျယ်သေးတော.လုပ်လို.အရမ်းကောင်းတယ်
အခု ဖင်ပါ ပါ ကင်ဖွင်.ပေးလိုက်ရတော.အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ
နင်လဲဘယ်လိုလဲလီးကြီးတာ ကြိုက်လား သေးတာကြိုက်လား
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော.ကြီးတာကြိုက်တယ် ဟု အရှက်မရှိတော.ပဲရီဝေကပြောလိုက်လေသည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်းရီဝေ၏ပြောစကားကြောင်. စိတ်ပါလာကာ
နင် လီးကြီးတာ ကြိုက်ရင် ငါ.သူငယ်ချင်း ၁ယောက်နဲ.မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေ
သူ က ငါ.ထက်တော.နည်းနည်းကြီးတယ်ဟ
အာ အန်ကယ် ကလည်း ကျွန်မကို ဘယ်လိုထင်နေလည်း အန်ကယ်တောင်မှမတက်သာလို.လိုက်လျောနေတာပါ
မဟုတ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ., မဟုတ်ပါဘူးဟ ငါက နင် လီးကြီးကြီးနဲ.လိုးတာကြိုက်တယ်ဆိုလို.ကူညီမလို.ပါ
ကဲထားလိုက်ပါတော. ငါစိတ်ပါလာပြီ လီးစုပ်ပေးတော.
သွားဆေးအုန်းလေ .. ညစ်ပတ်ပြီးပေ နေတာကို
မဆေးတော.ပါဘူးဟာ စုပ်လိုက်စမ်းပါ နင်ကလဲ
ရီဝေလည်း ဦးထွန်းထွန်း လီးကြီးအားကြည်.ရင်းနှင်.ပါးစပ်ကသာညင်းနေသော့လည်း
လီးမြင်လျင်မနေနိုင်တော.သော သူ၏ကာမစိတ်ကြောင်. လီးကြီးအားငုံစုပ်လိုက်လေတေ
အား ပျွတ် ပျွတ် ပလပ် ပလပ် ပျွတ် ပျွတ် ပလပ်
ရီဝေလည်း လီးကြီးအားစုပ်နေရင်းနှင်.လီးမှပေကျံနေသော အရည်များအားပြောင်နေအောင်ရက်ပေးနေတော.သည်။
ပလပ် ပလပ် ပျွတ် ပျွတ် ပျွတ် အား ရှီး အား ပျွတ် ပျွတ် စွတ် ပလပ် ပလပ်
ရီဝေ၏ အာငွေ.ကြောင်.လီးကြီးမှာ မာတောင်လာပါတော.သည်။ ဦးထွန်းထွန်း လည်း ဥ ကိုစုပ်ပေးရီဝေ ပြွးရင် ဖင်ပေါက်ကိုပါလျက်
ရီဝေလည်း မရှက်တော.ပဲ ဦးထွန်းထွန်း၏ ဥများကိုငုံပေးပြီး အောက်ဆင်းကာ ဖင်ပေါက်အားလျက်ပေးတော.လေသည်။
ပလပ် ပလပ် အား အား အား ပလပ် ပျွတ် ပျွတ် ပျွတ် ပျွတ် ပလပ် အားရှီး အား ကောင်း ကောင်း အား ပလပ်
ဦးထွန်းလည်းရီဝေ၏ ပြု စုမှု ကြောင်.အကောင်းကြီးကောင်းနေလေတော.သည်။
နေလို. မရတော.သူမှာ ဇော်ထက်ပင်ဖြစ်သည်။
မထူးပါဘူးဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး အခန်းတွင်းသို. ဝင်ခဲ.လေသည်။
ရီဝေလည်း လည်းဦးထွန်းထွန်းဖင်ပေါက်ကို အပီအပြင်ရက်ပေးနေရင်းမှတံခါးဖွင်.သံကြား၍ကြည်.လိုက်ရာ
ဦးထွန်းထွန်း လည်းရီဝေထပြေးခြင်းကြောင်.ဖီးပျက်ကာ ရီဝေအားဘာလုပ်တာလဲ လာလေ ဟုပြောတော.
ရီဝေက ဟိုမှာ ဟုလက်ညိုးထိုးပြရာ ဇော်ထက်ကိုတွေ.သွားလေသည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်း ဟေ.ကောင် ဘာလဲဟ ဒီမှာ ကောင်းနေပြီဟ
ဇော်ထက်က လည်း ငါမနေနိုငိတော.ဘူးကွာ မင်းကောင်မလေးကအရမ်းမိုကိးတယ်
ရီဝေလည်း သူမသိသော ကုလားအသက်ကြီးကြီး၁ယောက်က သူအားမိုက်တယ်ဟုပြောတော. စိတ်ထဲကကျေနပ်သွားသော်လည်း
ဦးထွန်းထွန်း လည်း ဇော်ထက်ဝင်ရှုပ်မှုကြောင်.ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော.သလိုဖြစ်နေတော.သည်။
ဇော်ထက်ကတော.အကင်းပါးသည်။ နင် ကို လုပ်ချင်နေလို.ဟဟုပြောတော.
ရီဝေ က ကျွန်မအလို မတူဘူးနော် တိုင်မှာ ဟု ပြောတော.ဇော်ထက်က အေးလေ
နင်အလိုမတူလည်း ရပါတယ် ဒါပေမယ်. နင်နဲ.ထွန်းထွန်းနဲ.လိုးနေတဲ.ဗီဒီယိုကို ငါရိုက်ထားပြီးပြီ။
အဲဒါကိုတော. Online ကနေဖြန်.ရလိုက်မယ်။ဘယ်လိုလဲ နင်.သဘောနော်။
သူတို.ယုတ်မာကြလေပြီ ရီဝေငိုချင်စိတ်လည်းဖြစ် ပေါ်လာသည်။
ဒါသက်သက် အကျပ်ကိုင်ချင်းသာ, သူယုံကြည်မိသော ဦးထွန်းလည်းဘာမှမတက်နိုငိတော.ပေ။
ရီဝေလည်းစဉ်းစားရကြပ်နေလေသည်။ လိုက်လျော ရမည်လား ငြင်း ရမည်လား မသဲကွဲတော.ပေ။
ဇော်ထက်က ကဲဘယ်လိုလဲ နင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ
လီးကတော.တောင်နေပြီနော် မြန် မြန် ဆုံး ဖြတ်
ရှင်တို.ဖြစ်ချင်တာ ကိုလိုက်လျောမည်ဆို video ကို ကျွန်မကိုပေးမှာလား
ပေးမှာပေါ. ဟ , အိုကေလေ ဒါဆို ကျွန်မကို Video camera ပေး
ဇော်ထက်လည်း Video camera အားရီဝေအားပေးလိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်း camera ထည်းမှvideo file အားဖျက်ပြစ်လိုက်လေတော.သည်။
တယောက်ပြီးမှ တယောက်ပဲကျွန်မ လက်ခံမယ် အစဉ်ပြေလား
ဇော်ထက်က ပြာ ပြာ သလဲပင် ရ ပါ တယ် ရပါတယ်ဟုပြောလေသည်။
ထွန်းထွန်း မင်းအရင်လုပ် ငါ နောက်တော.မှလုပ်မယ် ဟုပြောကာ ခုံတွင်သွားထိုင်နေတော.သည်။
ဦးထွန်းထွန်း လည်းလီးကြီးကို ကိုင်ကာ ရီဝေအားကုန်းခိုင်းပြီးနောက်မှနေကာ ဆောင်.သွင်းလိုက်လေတော.သည်။
ဗျွတ် ဗွတ် ဗျိ ဖွတ် ဗျွတ် ဗျိ ရီဝေစောက်ဖုတ်ထဲသို.လီးကြီးမှာ ဝင်လာလေသည်။
ရီဝေအဖုတ်ထဲသို.လီးကြီးမှာ မဆန့်မပြဲဝင်လာပြီး ဦးထွန်းထွန်း မှာ ရီဝေ၏ ဖင်ကားကားလေးကို လက်နှက်ဖက်နဲ.ဖြဲကိုင်ကာ ခပ်မှန်မှန်လေးဆောင်.လိုးနေပါသည်။
ဗျွိ ဗျွပ် ဗျွပ်…ဖျွပ် ဖွပ်ဖွပ် ဘွပ် ဘွပ် …ဗျွိ ဗျွပ် ဘွပ် ဘွပ် ဗျွပ် ဖျွပ် ဈွပ် … နဲ. လေထွက်သံများမြည်မှ မျက်တောင်စင်းပြီးအလိုးခံနေသော ရီဝေလည်း မျက်လုံးဖွင်.ကြည်.လိုက်ရာ သူ ဖင်ကုန်းပြီးအလိုးခံနေတာကို သူလီးကြီးအားကိုင်ရင်းကြည်.နေသော ဇော်ထက်အား သတိထားမိသွားလေသည်။ဦးထွန်းထွန်းမှာလည်း အဆက်မပြတ်စောင်.နေတာမို. ရီဝေလည်းဖီးတက်လာကာ ဇော်ထက်အား ကြာ ကြည်.ကြည်.ပေးနေတော.သည်။
ရီဝေမှာ အခုအချိန်တွင်တော.ဘယ်လို လီးလာ လာ ခံမည်.ပုံစံဖြစ်နေတော.သည်။ရီဝေခံနိုင်လာပြီဆိုတာကိုသိသောအခါ ဦးထွန်းထွန်း လည်းတဖြည်းဖြည်းနှင်.ဆောင်.ချက်များမြန်လာပါတော.သည်။
ဖွတ် ..ဖွတ် ဖွတ် …ဘွတ် ဘွန် ဘွတ် ဖွတ် ဖပ် ဖပ် ဘွတ် အင်. အ အ
အင့် .. အင်. အား အား အ … အ . အာ အားလား
ဦးထွန်းထွန်း ၏လီးကြီးဝင်ထွက်သံ ဂွေးဥက ရီဝေ တင်ပါးတွေကို တဖတ် ဖတ်နဲ.လာရိုက်သံတွေ ရီဝေရဲ.ညည်းသံတွေနဲ.ဆူညံနေပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း လီးကြီးက အဖုတ်ထဲ ထိုးခွဲဝင်လာတဲ. အတိုင်း အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကလီးနဲ.အတူ အတွင်းလိပ်ဝင်သွားလိုက်နှင့်မို.ရီဝေလည်းဖီလင်တွေတက်နေပါတော.သည်။၁၀မိနစ်လောက်ဦးထွန်းထွန်းကရီဝေနောက်ကလိုးပြီးတော. ရီဝေအားပက်လက်လှန်ခိုင်းပါတော.သည်။
ရီဝေပေါင်လုံးအောက်လက်လျှိပြီး အပေါ်ကိုတွန်းတင်လိုက်တော.ရီဝေအဖုတ်ကြီးမှာပြူးပြီးပေါ်လာပါသည်။ရီဝေတင်ပါးဟာ ကုတင်ကနေလုံးဝလွတ်ထွက်သွားပြီး အဖုတ်ဟာလီးနဲ. တတန်းတည်းဖြစ်သွားတော.လေသည်။
နောက်တေတာ.မှ ဦးထွန်းထွန်း လည်းသူတကိုယ်လုံးအားနှင်. လီးကြီးကို အဖုတ်ထဲ တစ်ဆုံးထည်.ကာ အားရပါးရလိုးလိုးပါတာသည်။
ပြွတ်ပြွတ် ပြွတိ .ဗြစ် ဗြစ် … ဒုတ် အင့် အ အ အား သေပါပြီပြွတ်
အား အား အားလား ထွတ် ဗွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဒုတ် ဖွပ် အားအား
ဆောင်.ချက်တိုင်းထိမိလှပြီးလီးထိပ်က သားအိမ်ကို လာဆောင်.နေပြီးရီဝေမှာလည်းနာလည်းနာ ကောင်းလဲနေပါတော.သည်။
အီး အားဖြေးဖြေးလုပ်ပါ အန်ကယ် ရယ်
ဦးထွန်းထွန်း ကတော.ဘာမှမပြောပဲ အဆက်မပြတ်ကိုလိုးနေပါတော.သည်၊
ရီဝေလညိးစိတ်ပါလာပြီးခြေထောက်၂ချောင်းကို ဦးထွန်းထွန်း ခါးမှာ ချိတ်ထားလိုက်လေသည်။
ပြွတ် ပြွတ် ဖတ် ဖတ် အ အား အား ဖတ် ဖတ် ဦးထွန်းထွန်း ဆောင်.ချက်များမ်ြန်လာပါသည်။
ရီဝေလည်းခြေထောက်၂ချောင်းနှင်.ဦးထွန်းထွန်း ခါးအားပြန်ပြန်ဆွဲပေးပြီး ဆောင်.ချက်များကိုအားပါအောင်ကူညီနေပါသည်။
ဗြစိး ဗြစ် အင်. အင်. ဗြတ် ဗြွတ် အား အား အင့် အင့် အား
အန်ကယ် မြန် မြန် လေး မြန် မြန် အား အ အီး အီး အား အ
အ အား အာလားဗွတ် အ အ အ
ဦးထွန်းထွန်း လည်းလိုးချက်တွေပြင်းထန်လာပြီး အချက်၃၀ခန်ာကြာတော. ရီဝေစောတ်ပတ်ထဲသားအိမ်ထဲထိ လရည်များပန်းထည့်ကာ ရီဝေပေါ်မှောက်ချလိုက်ပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း ဇော်ထက်က ခပ် ရိုင်းရိုင်းမို.လန်.ကာ စောက်ဖုတ်အားရေသွားဆေးနေပါသည်။
နည်းနည်းကြာတော. ဇော်ထက်က ကောင်မ ရေဆေးတာကြာလိုက်တာ မပြီသေးဘူးလား ဟု အော်နေတာမို.ရီဝေလည်းအမြန်ထွက်လာခဲ.ပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း ဇော်ထက်နားရောက်လာတော ဇော်ထက်က ထိုင်ခိုင်းပြီး ပုဆိုးချွတ်ပေးလိုက်လေသည်။
ပုဆိုးချွတ်လိုက်လျင်ပဲ ရီဝေရော ဘေးမှထိုင်နေသူ ထွန်းထွန်းပင်အံသြသွားလေသည်။
ဇော်ထက်၏လီးကြီးမှာ ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ခန့်.တုတ်ပြီး ဂေါ်လီများလည်း ပတ်လည်ထည်.ထားတာမို. ရီဝေအဖို. အီဆိမ်.နေမှာသေချာပါတော.သည်။
ဇော်ထက်လည်း ကဲ ငါ.လီးစုပ်ပေးလေ ဘာလုပ်နေတာလဲဟုဆိုကာရီဝေအား ခြေထောက်ဖြင်.ကန်လိုက်သဖြင်. ရီဝေလည်းလန်.ကာဇော်ထက်၏လီးကြီးအား သူ.ပါးစပ်ဖြင့် စုပ် လိုက်ကာ လျာဖြားလေးကလည်း လီးတန်တလျောက် လျက်ပေးရင်း လီးတန်ကြီးကို အာခေါင်ထဲထိမြိုချကာ စုပ်ပေးမှုတ် ပေးနေပါသည်။
ပြီးလျင် ဒစ်ပတ်လည် လီးတန်တလျောက် လျက်ပေးလိုက်အဆုံးထိရောက်အောင်ကြိုးစားလုပ်ပေးနေပြီး တခါ တခါ ဂွေးဥမဲမဲကြီးကိုပါ လျက်လိုက် စုပ်လိုက်ဖြင်.ကုလားအကြိုက်တွေ.အောင် ပြု စုပေးနေပါသည်။
ဇော်ထက်လည်း ရီဝေလီးစုပ်တာကိုဇိမ်ခံရင်း လက်တဖက်က ရီဝေ၏ခေါင်းကိုကိုင်ကာ ညှောင်.ပေးနေပါသည်။
ပလွတ် ပျွတ် ပျွတ် ဈွပ် ဈွပ် အု အု အု ပျွပ် စွပ် နှနှင်.ရီဝေမှာ အသံမြည်အောင် ပင် လီးစုပ်ပုလွေမှုတ်ပေးနေပါတော.သည်။
ထို.နောက် ဇော်ထက်က `ကောင်မ လီးစုပ်တာ တော်ပြီ နင့်ကိုလိုးတော.မယ်
ဒီကုတင်နားမှာ လေးဘက်ထောက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှောက်နေပေး ဒါမှ ငါအားရပါးရ လိုးလို.ကောင်းမှာ ´ဟုပြောလိုက်တာမို.
ရီဝေလည်း ဇော်ထက်ခိုင်းသည်.အတိုင်း ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်တွင်ထူးထောက်ကာကိုယ်တပိုင်းကကုတင်ပေါ်မှောက်ပြီးဖင်ကုန်းပေးလိုက်ရာ ကားစွင်.နေသည်ဖင်ကြီးထောင်ကာ
ဇော်ထက်လည်း ရီဝေကုတင်နှင်. လေးဖက်ထောက်ပေးထားတာ ကွက်တိမို.ဆောင်.လိုးလျင်ရှေ.သို.မယိုင်ဘဲတောင်.ခံထားသလိုဖြစိအောင် စီစဉ်ထားတာမို. ရီဝေအဖို.ဖင်ကော.ကာ အီဆိမ်.နေ.အောင်အလိုးခံဖို.သာရှိတော.ပါသည်။
ဇော်ထက်လည်း ကောင်မ နင့်ကိုလိုးမယ် ငါ.လီးကိုင်ထည်.ပေး ´ဟုဆိုကာရီဝေကိုခွကာ စောက်ပတ်ဝတွင် ဒစ်တေ. လိုက်ရာ ရီဝေလည်း လလက်လျှိကာ လီးကြီးကို သူ အဖုတ် ဝတည်.ပေးလိုက်ပြီးအကို ထည်.လို.ရပြီ ဖြေးဖြေးနော် ဂေါ်လီတွေနဲ.ဆိုတော.မခံနိုင်မှာစိုးလို.´
နင်လျာမရှည်နဲ ကောင်မ ဟု ပြောပြီး ရီဝေ၏ ခါးလေးကိုကိုင်ကာ သူလီးကြီးကို ရီဝေအဖုတ်ထဲသို. လိုးသွင်းလိုက်ပါသည်။
ဗျိ ဗျွိ ဈီ ဗျွပ် ဘွပ် အီး အား ဟာ အင့် အင့် ဟင့် အ. အ အီး ကျွတ် ကျွတ် အဟင့် အဟင့်
အ သေပါပြီ အစ်ကို ရယ် အား အား အ အ
ဟင် .ဟင့် အ အ. အီး အီး အ အ အ အား နှနှင့်ရီဝေမှာ ဇော်ထက် က တရကြမ်း လိုးနေတာမို. အီဆိမ်.နေတာကို အံကြီတ်ခံရင်း ဖင်ကြီးထောင်ကာ ကုတင် နှနှင် ပေါင်ထောက်နေတာမို. ရှေ.သို.မယိမ်းပဲ စင်းခံနေပါသည်။
ဇော်ထက်ကတော ရီဝေဖင်ကြီးခါရမ်း နေကာ စော်ဖုတ်ထဲသူလီးကြီး ဝင်နေတာကို အရသာခံ ကြည်.ရင်း စောင့်လိုးနေပါသည်။
ပါးစပ်ကလည်း ဟင်း ဟင်း ကဲကွာ ကဲ ကောင်းလိုက်တာစစည်းနေတာပဲ ဟင် ကောင်မ နင်ရော ခံလို.ကောင်းတယိမဟုတ်လား
`ဗျွပ် ဗျွပ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွပ် ဖျွပ် အီးလအား အား ဟ အ အင့် ဟင့် ဟင့် အစ်က်ုရယ် ခံလို.ကောင်းပါတယ် အိ အိ အား ညီမ စောက်ပတ်လဲကွဲသွားပြီလားမသိဘူး အ အ အင့် ဟင့် အရမ်းကြမ်းတာပဲ အိ အိ အာ အား ဟင့် အီး ကျွတ် ကျွတ် ရီဝေမှာခံလို.လည်းကောင်း အီဆိမ့် လည်းနေတာမို.အံကြိတ်ကာ မွေယာ ကို ဆုပ်ကိုငိရင်း ကုလားအလိုးကို ခံနေပါ တော.သည်။
နဂိုကပင် တဏှာထန်သူမို. ရီဝေလည်းကာမရာဂပိုးများ ထရွကာ စောက်ဖုတ်က အရည်များလိုက်လာတာမို. ဇော်ထက် လီးကြီးမှာ ရီဝေအဖုတ်ထဲသို အဝင်အထွက်ပိုသွက်လာပါတော.သည်။
ဘွပ်ဘွဘွပ် ဖပ် ဖပ် ဗျွတ် ဗျွိ အင့် ဖွတ် အင့်အား အီး ဟာ အ အ အို ကောင်းတယ် အစ်ကို ဆောင့် မရပ်နဲ. ခံနိုင်လာပြီ အ အ အ အင့် အားအားလား အဟင့် နှင့် ရီဝေမှာ တဏှာထန်ကာ ဖင်ကြီးကို အနောက်သို.ပစ်ပေးနေပါသည်။
အင့် အင့် ပိ အိ အိ အား အား အိုး အားကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ အဖုတ်ထဲမှာပြည်. နေတာပဲ တအားဆောင့်လိုး အစ်ကို အား ဟ အဟင့် အ အဟေင်. အား အားလား
ဇော်ထက် လီးမှာ ကြီးလွန်းလို.အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ပါသူ.လီးနဲ.လိပ်ပြီးပါသွားပါတော.သည်။
ဇော်ထက် လည်းညောင်းလာ၍ ကောင်မ အပေါ်က တက်လိုးပေးစမ်းဟုပြေညကာသုလီးကြီးအား ရီဝေအဖုတ်ထဲမှထုတ်ကာ အောက်မှာပတ်လက်လှန်ပေးနေလေငည်။
ရီဝေလည်း အခုမှသူ.အဖုတ်အားကြည်.မိရာ ဂေါ်လီ ဒဏ်ကြောင်.အောက်ခြေမှာ နည်းနည်းကွဲသွားပြီဖြစ်သည်။
သို.သော်လည်း ကာမစိတ်က ထကြွနေသေး၍ ဇော်ထက်ပေါ်ခွထိုင်ပြီး လီးကို အဖုတ်ဝနဲ.တေ.လိုက်လေသည်။
အိုး အုး အား ဝူး ဗြစ် ….. ဗြစ် .. . ဗြစ် အား
အားဟား အား ဟား ဗျစ် ဖျစ် ဗျွတ် ဗျစ် အ အင့် ပွ်ျ ကျွတ် အ အ အား လယး အု အု
ဇောက်ထက်က အောက်ကပင့်လိုးနေရုံမကပဲ လက်ညိုးကလည်းရီဝေစအိုဝကို ကလိပြီး ဖင်ထဲကို လက်ညိုးနဲ.လိုးသွင်းနေပါတယ်
နောက်တော.လက်ခလယ်ပါထည် ကာ လက်၂ချောင်းနဲ.လုပ်နေပါငည်။
ရီဝေလည်း ဖက်နဲ.အဖုတ် တပြိုင်တည်းလိုးခံရတဲ.ဖီလင်ရလာပြီး စောက်ရည်တွေထွက်လာပါတော.တယ်၊
ဖွေတ် .. ပြွတိ ပြွတ် ဖွပ် စွပ် အ အ အင့် အ အ မေ. အင့် ဒုတ် ဗျွတ်
ဇော်ထက် က အားနေတေဲ.လက်တဖက်နဲ. ရီဝေခါးကိုသိုင်းဖက်ရင်း အောက်ကနေ ပင့်လိုးနေပါတော.သည်း။
ရီဝေနှုတ်ခမ်းကိုလည်းစုပ်နမ်းပြီး လျာကြမ်းကြီးနဲ. ပါးစပ်ထဲကလိကာ ဘယ် အပေါက်ကိုမှ အလွတ်မပေးတမ်းဖြစ်နေပါသည်။
ပြွတ် ဒုတ် ဒုတ် အ အ အင့် အမေ. အားရှိး ကျွတ် ကျွတိ
လီးဝင်လိုက်တိုင်ူအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက လီးကြီးနဲ. အထဲဝင်ငွားလိုက် လီးပြန်ဆွဲထုတ်ရင်အပြင်ကို လိပ်ထွက်လာလိုက်နှင့် အရည်တွေ အများကြီးထွက်နေလို သာအစဉ်ပြေနေတော.သည်။
မဟုတ်ရင်တေည အဖုတ်တခုလုံးဘဒီလို လီးကြီးကြာ ကြာ လိုးနေပဲုဆိုရင် ရီဝေအဖုတ်တွေ စုတ်ပြတ်ထွက်ကုန်တော.မှာသေချာနေငည်။
ဒီလိုနဲ.ရီဝေလည်းအချက်ပေါင်းများစွာ လိုးခံပြီးနောက်ပြီးချင်လာ ပါတော.သဘ်။
နောက်တော.ဇော်ထက်က ရီဝေကိုပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး ခြေထောက်ကိုတွန်းတင်လိုက်တော.ရီဝေအဖုတ်ဧာမိုးပေါကို ပြူး ပြူး
ကြီး ဇော်ထက်စိတ်ကြိုက်လိုးလို.ရအောင် ဖြဲပေးနေပါတော.သည်။
ဒုတ် ဒုတ် ပြွတ် ပြွတ် အား ဖွတ် စွပ် စွပ် အိ အား ပလတ် ဒုတ် အင့် အင့်
ဇော်ထက်လည်းလိုးနေရာက နေ ရီဝေကိုဖက်ပြီး ပါးစပ်ကိုစုပ်ကာ ခါးအားသုံးပြီး လီးကို ရီဝေအဖုတ်ထဲ စိုက်စိုက်ပြီး ဆောင်.လိုးနေပါသည်။
ရီဝေလည်းပေါင်၂ချောင်းကို အပြဲဆဲုးကားပေးထားတော.လီးကြီးမှာ အရင်းထိဝင်နေပါတော.သည်၊
အား အား အင့် အ အာ အ
အား အ အား အား အားလား
တအောင့် လောက်ကြာတော.ဇော်ထက်လည်းတရှုးရူးနဲ.ဆောင့်ချက်တွေမြန်လာပြီး ဆန်.ငက်ဆန့်ငင်နဲ.ရီဝေ အဖုတ်ထည်း သုတ်ရည်များ ပန်းထုတိ လိုပ်ပါသည်။
ရီဝေလည်း ပြီးသွားပြီ အဖုတ်ထဲကနေ လီးကြီး ကို ညစ်ပေးနေပါသည်။
တအောင်.ကြာတော.ဇော်ထက်က သူလီးကြီးအား ဆွဲထုတ်ပြီးရီဝေကိုယ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါသည်။
သုတ်ရည် တွေက ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင် လီးထုတ်ပြီးတာတောင် အဖုတ်ဝကနေ တစိမ်.စမ်.အပြင်ကိုလျှံကြနေတာ အများကြီးဖြစ်နေပါတော.ငည်။
ရီဝေလည်းကုလားအလိုးကို ခံပြီးမှမှားမှန်းသိသော်လည်း ကာမစိတ်ကတော .ထပ်မှားချငိနေပါသေးတော.သည်။
ထက်လည်းရီဝေအပေါ်မှဆင်းပြီးခုံတွင်ထိုင်ကာ ကောင်းလိုက်တာကွာ , အဖုတ်ကအရမ်းလိုးလို.ကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးပဲထွန်းထွန်းရာ။
ရပါတယ်ကွ မင်းကလည်း အေးဆေးပါ ငါလိုးအုံးမယ် မင်းနားတော.ဟုဆိုကာ ရီဝေအားဦးထွန်းထွန်းလိုးပြန်တော.သညိ။
ဒီလိုနှင်.ရီဝေအား ဦးထွန်းထွန်းက ၂ချီ ဇော်ထက်က ၂ချီ ဆက်လိုးပေးလိုက်ရာ ရီဝေလည်းလမ်းပင်မလျောက်နိုင်တော.ပဲ အဖုတ်လမ်းယောင်ကိုင်းကာ အိမ်သို .ည ၆နာရီလောက်မှပြန်ရောက်လေသည်။
အိမ်သို.ရောက်သည်နှင့်တံခါးဖွင်.ကာ အိမ် ထဲသို.ဝင်လိုက်သောအခါ သူ.အမျိုးသားကျော်ကျော် အားထိုင်နေသည်ကိုတွေ.လိုက်ရလေသည်။
ရီဝေလည်း ဟန်မပြတ် အိမ်ထဲသို.ဝင်ကာ `မောင်ပြန်လာပြီလား ´ဘယ်တုန်းကရောက်နေလဲ ဟုမေးတော.ကျော်ကျော်က ကြာပြီ မိန်းမရောဘယ်သွားနေတာလဲ သူငယ်ချင်းအိမ် ခဏသွားတာပါ
ကဲဒါဆိုလည်းချစ်ကြရအောင်ဟုဆိုကာ ရီဝေစကပ်အားဆွဲချွတ်ကာ အဖုတ်အားလှမ်းနှိုက်လိုက်ပါတော.သည်။
ရီဝေအားလီးကြီး ၂ချောင်းအားရပါးရလိုးခံထားရသဖြင်.အဖုတ်ကြီးမှာ ယောင်ကိုင်းကာ ကျိန်းစပ်နေသည်.အတွက် ကျော်ကျော် လက်ဖြင့်နှိုက် ရုံလေးဖြင်.နာကျင်ကာ အော်လိုက်မိသည်။
ကျော်ကျော်လည်း မိန်းမဘာဖြစ်တာလဲ ထိရုံလေးရှိသေးတာကို ပြစမ်းဘာဖြစ်လို.လဲဟုဆိုကာရီဝေအဖုတ်အားဖြဲကြည်.သောအခါ
ဟင်ကျော်ကျော် အံ.သြသွားလေသည်။ရီဝေအဖုတ်ကြီးမှာ အောက်ခြေမှာ နည်းနည်းကွဲရာတွေ.ရပြီး အထဲတွင်လည်း သုတိရည်များအနည်းငယ်ကျန်နေသေးသည်။
ကျော် ကျော်လည်း စိတ်တို ကာ ရီဝေအားတွန်းလိုက်ပြီး နင်ငါ.ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်နေတယ်ဟုတ်လား
နင်.ကိုမပေါင်းဘူးကွာမယ် , ရီဝေလည်းကျော်ကျော်ပြောသည်.စကားကြောင့် ကျေိာကျော်အားဖက်ကာငိုတော.လေသည်။
သွား ငါနားမကပ်နဲ.သွား , မောင်ရယ်မိန်းမရှင်းပြတာ ခဏလေးနားထောက်ပါဦး.
ငါ.ကိုဘာမှလာရှင်းပြမနေနဲ ,ကျော်ကျော် လည်း ရီဝေအားပြောမယ့်သာပြောရသည်။ သူ.ဇနီးချောလေးအားမကွဲကွာလိုပေ။
ရီဝေက မောင်ရယ် ခဏတော.နားထောင်ပေးပါ ပြီးမှမောင်ဆုံးဖြတ်ပေါ.နော်ဟု ပြောသဖြင့်
ကျော်ကျော်လည်းရီဝေရှင်းပြမှဟိုကောင်တွေက ရီဝေအာစအကြပ်ကိုင်လိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသဖြင့် ရီဝေအားသနားသွားလေသည်။
သူလီးမှာ အရမ်းသေးသည်.အပြင် မိန်းမနှင့်လုပ်ရင်လည်း ကြာကြာမတောင်နိုင်သဖြင်.ရီဝေစိတ်မပါနိုင်အမြဲဖြစ်နေသည်မှားသူကိုယ်တိုင်ငိလေသည်။
အခုတော. လီးကြီးများဖြင့် အလိုးခံခဲ.ရသဖြင့် ရီဝေလည်းစိတ်ကျေနပ်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
မိန်းမသူတို.နဲ.လုပ်တော.ပြီးရော ပြီး လား
အာ မောင်ကလည်း ဘာတွေမေးနေတာလဲ
မိန်းမစိတ်ပါရင်ပြီးတာပါပဲ မောင်လည်းမိန်းမစိတ်ပါအောင်ဆေးသွားထိုးမယ်လေ ကြီးသွားအောင်ဟု ကျော်ကျော်လည်းညိုးငယ်စွာပြောလေသည်။
ရပါတယ် မောင်ရ ,မိန်းမက မောင့် လီးသေးသေးလေးလည်းစိတ်ပါ ပါတယ်။
မောင် မိန်းမကို ခွင့် လွှတ်တယ်သိလား, ဒါပေမယ့် မိန်းမ နောက်သူတို.နဲ.မလုပ်နဲ.တော.နော်
သူတို.နဲ.တော.မလုပ်နဲ.တော., အင်းပါမောင်ရ မိန်းမလည်းထပ်မဖြစ်တော.ပါဘူး
အခုတောင် တော် တော်ကျိန်းနေတာပဲ
မလုပ်တော.ပါဘူး မိန်းမ နာနေတည့်ဟာကို နောက်နေ.မှလုပ်မယ်လေဟုပြောကာ ရီဝေအားဖက်ပြီးအိပ်လိုက်ပါတော.သည်။
ကျော်ကျော်လည်းရီဝေ၏ ပြောပြချက်များကြောင့် စိတ်မဆိုးမိသော်လည်းကိုယ့် ကို ကိုတော.အံသြမိလေသည်။
မိမိ ၏ မိန်းမအားသူများစော်ကားသည်ကို စိတ်တို ရမှာဖြစ်ပေမယ့် သူကတော.ထိုသို့မဖြစ်ပဲ ပို၍ ပင်စိတ်ပါလာသလိုဖြစ်နေသည်။
မိမိစိတ်ပဲ မကောင်းတော.၍လား အနောက်နိုက်ငံတွေမှာ ကြားဖူးသည့် cuckold ပဲသူဖြစ်နေပြီလားဆိုတာစဉ်းစားမရဖြစ်နေသည်။
သေချာသည်ကတော.ရီဝေပြောပြနေတုန်းက သူ.တော်တော်စိတ်ပါနေတာကို ကျော်ကျော်သတိထားမိသည်။
မိန်းမရောသူ ရောစိတ်ပါအောင်မိန်းမအတွက် ယောကျာင်္း၁ယောက်လိုအပ်ပေသည်။
အသိထဲကတော.မဖြစ် , အချိန်မရွှေး သူတို.အကြောင်းကို ဖွင့်ပြောနိုင်သည်။
စဉ်းစားနေတုန်း သူတို.ရုံးမှ ပီတာကိုသတိရသွားသည်။ပီတာသည်ပြင်သစ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ကျော်ကျေိာတို.ကုမ္ပဏီ တွင် Director ရာထူးဖြင်.အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောသူဖြစ်သည်။မိန်းမကိစ္စလည်းအလွန်ဝါသနာကြီးသူဖြစ်၍ ကျော်ကျော်လည်းပီတာ အားစည်းရုံးရမည်ဟု စဉ်းစားလိုက်လေသည်။
၂ရက်ခန်.ကြာသော် ရီဝေလည်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးကျော်ကျော်နှင်.ဆက်ဆံရာ အဖုတ်မှာ အရမ်းချောင်နေသဖြင့် စိတ်မပါသော်လည်းကျော်ကေော်စိတ်ပါစေရန် အစွမ်းကုန်ပြုစုပေးမှုကြောင့် ကျော်ကျော်လည်း ၂ချီတောင်ပြီးသွားလေတော.သည်။
ကျော်ကျော်လည်းသူသာဆန္ဒပြီးမြောက်၍ ရီဝေစိတ်မပါဘူးဆိုသာသိ၍ ရီဝေအတွက် အစဉ်ပြေစေရန် အတွက်စဉ်းစားရလေသည်။
မိန်းမ စိတ်မပါဘူးလား မောင်နဲ.လုပ်ရတာ
မညာပါနဲ့ ကွာ မောင်သိပါတယ်
အာ မောင်နော် မဟုတ်တာတွေလျောက်မလုပ်နဲ. တော်ကြာ.လျောက်ပြောကုန်မှခက်နေမယ်
စိတ်ချ အဲဒါတော.သူ ကနိုင်ငံခြားသား
မောင် စီစဥိပေးမယ်, ရီဝေလည်း ကျော်ကျော်ပြောသည်. နိုင်ငံခြား င်
ကျော်ကျော် လည်း ရီဝေအားပြောပြီး ရုံးသို.ထွက်လာကာ ပီတာအား ဘယ်လိုစည်းရုံးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတော.သည်။
ပီတာအားတွေ.သော် `ဟယ်လို ပီတာ မတွေ.ရတာကြာပြီ အားရင်ဆုံရအောင်လေ
ပီတာကလည်း အင်းကျော်ကျော်အားရင်ဆုံမယ်လေ အချိန်ကြို ပြောပေါ. နောက်အပတ်တော.အိမ်ပြန်မလို.
ဒီမှာအစဉ်မပြေဘူးလား , ပြေပါတယ်ကျော်ကျော်ရ မိန်းမကိုသတိရလို.ပါ အော်အိုကေ အိုကေ ဒါဆို ညနေတွေ.ကြမယ်လေ
မကောင်းဘူးလား အို ကေ လေ တွေ.ကြမယ်
ဘယ်သွားကြမလဲ club သွားမလား ကျော်ကျော်
အင်းသွားလေ မိန်းမတော.ခေါ်ခဲ့မယ်လေ အိုကေလား အိုကေပါတယ် ကျော် ကျော်ရ
ကျော်ကျော်လည်း ပီတာနှင့် ချိတ်ပြီးသည်နင့်မိန်းမအားဖုန်းဆက်ကာ ဒီညမိန်းမအတွက် မောင်စီစဉ်ထားတယ်
ပီတာနဲ. ကလပ်သွားကြမယ် ကျန်တာတော.ပြီးမှ ဆက်ကြ တာပေါ.
ရီဝေလညိးကျော်ကျော်ပြောစကားကြောင့် ရင်တွေတုန်ကာ အဖုတ်ပင်ယားလာပါလေတော.သည်။
ညရောက်တော. ကျော်ကျော်နှင်. ပီတာ က frendship ဆိုတဲ.ဆိုင်မှာ သောက်စားရင်း ရီဝေအားစောင့်နေပါသည်။
ရီဝေလည်းကျော်ကျော်ပြောသည်. ဆိုင်သို.ရောက်လာကာ ကျော်ကျော် အားရှာလေတော.သည်။
ထောင့်ဆုံးဝိုင်းတွင် ထိုင်နေသော ကျော်ကျော်နှင့် လူမည်းတဦးအားတွေ.လေသည်။
ပီတာဆို၍ လူဖြူထင်ထားသော်လည်း အခုတော.လူမည်းကြီးဖြစ်နေလေသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိဆန္ဒအာသာပြေဖို.သာ အရေးကြီး၍ ကျော်ကျော်တို.ဝိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်လေတော.သည်။
ကျော်ကျော် လည်း ရီဝေအားမြင်သည်နှင့် လာ မိန်းမထိုင်
သူ က ပီတာတဲ..ကိုယ်တိုရုံးက france မှာနေတယ် ဒီမှာအလုပ်လုပ်လာလုပ်တာ
ပီတာလည်း ရီဝေအားကြည်. ကာ ဟုတ်ကဲ.တွေ.ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်
ကျော်ကျော်အမျိုးသမီးကို အခုမှတွေ.ဖူးတယ် တော်တော်လှတာပဲ
ကျေးဇူးပါပဲ ဟုရီဝေလည်း ပြော လေသည်။ကဲစားကြပါ သောက်ကြပါ ကြုံတုန်း ကျွန်တော်ပဲ ကျေွးပါမယ့်
ဟု ပီတာကပြောတော.ကျော်ကျော်လည်း ကဲမိန်းမကတော. Spy ပဲသောက်နော်ဟု ဆိုကာ သုံးယောက်သားပျော်ပျော်ပါးပါး သောက်စားကြပါတော.သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင်အမျှ မူးလာကြပြီး စကားပြောများလည်းပွင့်လင်းလာပြီး ကျော်ကျော်ကပီတာအား စစကားစလေသည်။
ပီတာ ဒီမှာနေတာအစဉ်ပြေလား မိန်းမကိုရော မလွမ်းဘူးလား
ပီတာက လွမ်းတာပေါ.ဗျာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်တော်လည်း တောင့်တမိတာပေါ.ကျော်ကျော်ရ
ဒီမှာလည်းပေါ ပါတယ်ဗျ မဟုတ်ဘူးလေဗျာ ကျွန်တော် ဆက်ဆံရင်စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တာကို ပဲသဘောကျတာ
အော် အော် ကျွန်တော်နားလည်ပြီဟု ကျော်ကျော်လည်း ပြောလိုက်လေသည်။
ကျော်ကျော်တို.ရော ဘယ်လိုလဲ အစဉ်ပြေလား
ပြေပါတယ် ဗျာ ပြေပါတယ် ကျော်ကျေလည်း ပီတာအားပြန်ပြောရင်း ကလပ်သွားကြမယ် ဟု ဆက်ပြောကာ နောက်ဆုံးခွက်ကို အဆုံးသတ်လိုက်လေသည်။
ကလပ်သို.ရောက်သောအခါ ကျော်ကျော် ပီတာ ရီဝေ ၃ယောက်ပျော်နေကြကာ တွဲပြီးကနေလေတော.သည်။
ပီတာက ရီဝေအားကပ်နေသောကြောင့် ကျော်ကျော်လည်း မပြောတောာပဲ
ပီတာ ရီဝေကို ကြည့်ထားလိုက်အုံး ငါ toilet သွားအုံးမယ်
အိုကေ အိုကေ စိတ်ချဟုပြောကာ ဆက်ကနေပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ရီဝေနားသို.မူးနေသည့်ကောင်လေးများကပ်လာသဖြင့် ရီဝေလည်း ပီတာနားသို. တိုးကပ်သွားပါသည်။
ပီတာနှင့်ရီဝေမှာ အခုဆို တော်တော်လေးနီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။
ရီဝေလည်း ပီတာအားအနီးကပ်ကြည့်မှ ပီတာကအရပ်ရှည်သဖြင်.သူမော.၍ကြည့်နေသဖြင့်ပီတာကသူ.ထက်ခေါင်းတလုံးမကပင်မြင့်နေလေသည်။
ရီဝေလည်း ပီတာနှင့်အလိုက်သင့်တွဲကရင်းပီတာ က သူ ခါးများအားလာဖက်လေသည်။
ရင်ဘတ်ချင်းထိကပ်နေပြီး ပီတာအောက်မှဖောင်းကြွနေသောပစ္စည်းကြီးမှာ ရီဝေ ဗိုက်ကိုသွားထိနေပါသည်။
ဆော်ကြီးကလည်းကွာ တွဲစရာရှားလို.ကပ္ပလီကိုမှတွဲရလား စုတ်ပြတ်ကုန်တော.မှာပဲ ငါတို့နဲ.တွဲလဲရတာကိုဟု ကျိတ်မနိုင်ခဲမရပြောနေပါတော.သည်။
ပီတာလည်း ရီဝေက အနီးကပ်ဖြစ်သဖြင့် သူ.စိတ်ကို ထိန်းထားသော်လည်း ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော.ပဲ လီးကြီးမှာ ထောင်ထနေပါသည်။
ကျော်ကျော်အား အားနာကာ ဘေးဘီသို.ကြည်.သော်လည်း မတွေ.ရသဖြင့် ဆက်လှုပ်ရှားနေပါသည်။
ရီဝေလည်း ပီတာ က သူ လီးကြီးနှင့် အတင်းထိအောင်ကြိုးစားနေသဖြင့် စိတ်ထဲမှာ ကာမစိတ်များထကြွလာပါတော.သည်။
ပီတာ ကတဖြည်းဖြည်းတိုးနေ၍ ရီဝေလည်း အလိုက်သင့်ပင်နေပေးရင်းဆက်ကနေပါတော.သည်။
တဖြည်းဖြည်း ကရင်းနှင့် ပီတာ က အတင့်ရဲကာ ရီဝေဖင်လုံးကြီးအား ဖျစ်ညစ်လိုက်ပါတော.သည်။
ရီဝေလည်းအံ.အားသင့်ကာ ပီတာကို မော.အကြည့် ပီတာက တိုးတိုးနေဆိုသည့် အမူအရာဖြင်.သူ.ပါးစပ်ပေါ်လက်တင်ပြသဖြင့် ဆက်မပြောတော.ပဲနေ နေပါတော.သည်။
ထို.နောက် ပီတာလည်း ရီဝေနားကပ်ကာ ရီဝေရယ် အရမ်းလှတယ်ဗျာ
ခင်ဗျားကို ချစ်ချင်နေလို့ ကျွန်တော်ဟာကြီးလည်းတောင့်တင်းနေပြီဗျာ
ရီဝေလည်း မသင့်တော်ပါဘူးပီတာ ရယ်ဟု မူပြီးငြင်းနေပါသည်။
ပီတာက ခဏလေးပါဗျာ ကျွန်တော့်ကိုသနားပါအုံး
ဒါဆို ကျော်ကျော်ကို ပြောကြည့်လေ သူ ခွင့်ပြုရင်ရပါတယ်ဟု ရီဝေလည်းပြော လိုက်လေသည်။
အာ သူသိရင်ပြသနာ တက်မှာပေါ. နင်တို.လူမျိုးတွေက ဒီလို ကိစ္စဆို ခွင့်မလွှတ်ကြဘူးလေ။
ငါတိုနိုင်ငံမှာသာ အစဉ်ပြေတာ လေ။
ရှင်ပြောကြည့်ပါအုံး သူ ကနားလည်တက်ပါတယ်။
အိုကေလေ ဒါဆိုပြောကြည့်မယ် ပြောလို အစဉ်ပြေရင်ရီဝေ သာ ကျွန်တော့်ဆန္ဒကိုလိုက်လျော ပေးပါ
ကောင်းပြီလေဟု ရီဝေလည်း ပြောလိုက်တော. ပီတာလည်း ပြာ ပြာသလဲပင် လာ ကျော်ကျော်ကို သွားရှာမယ် တွေ.ရင်ပြောမယ်ဆိုပြီး club အပြင်သို. အမြန်ထွက်လာခဲ.လေသည်။ရီဝေစိတ်ထည်းတွင်တော.ပီတာ ဘယ်လောက်များလိုးချင်စိတ်ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ခန်.မှန်းမိလေသည်။
ပီတာ လည်း club ဝင်ပေါက်ဝတွင်ဘီယာဘူးကိုင်ကာသောက်နေသော ကျော်ကျော်အားတွေ.လေသည်။
ကျော်ကျော်လည်း ပီတာနှင်.ရီဝေအားတွေ.သော် အရမ်းမူးချင်ယောင်ဆောင်ကာ သွားကြမယ်လေ ငါတော်တော်မူးနေပြီ
မခံနိုင်တော.ဘူး အိပ်ချင်နေပြီဟုပြောတော.ရီဝေက ပီတာ ကျန်သေးတယ်လေ ဟုပြောတော.
ပီတာပါအိမ်ခေါ်ခဲ.လေ မနက်မှပြန်ပေါ.ဟု ပြောတော.ပီတာလည်းဝမ်းသာကာ အမြန်ပင်ကားပေါ်တတ်လေတော.သည်။
အိမ်ရောက်တော. ကျော်ကျော်အားကုတင်ပေါ်တွဲပို.ပြီး ပီတာကကျော်ကျော်ကိုပြောပြီးပြီ
သူ ကအိုကေတဲ. ရီဝေပဲကျန်တော.တယ်ဟု ရီဝေအားပြောလေသည်။
ရီဝေလည်းဘယ်တုန်းကပြောတာလဲ ခနကပဲပြောလိုက်တာ.ကျွန်တော့်ကိုကူညီပါဆိုပြီးရီဝေနားတိုးကပ်ကာ ရီဝေအားဖက်လိုက်လေတော.သည်။
ရီဝေလည်းနဂိုထဲကမှခံချင်စိတ်ပြင်းပြနေ၍ မငြင်းတော.ပဲပီတာဖက်တာကို ခံလိုက်ပါသည်။
ပီတာလည်း အဆင်.တက်ကာ ရီဝေပါးစပ်အားနမ်းကာသူ လျာကြီးဖြင့်ကလိနေပါသည်။
လက်တဖက်ကလည်းရီဝေ စကတ်ကိုချွတ်ကာ ရီဝေအဖုတ်ကြီးအားနှိုက်နေပါတော.သည်။
ရီဝေလည်းကာမစိတ်များရွထလာကာပီတာ ဘောင်းဘီပေါ်မှ သူလီးကြီးအားလက်နှင်.စမ်းလိုက်ပါသည်။
အား အမေ.ရှီး အား ပလတ် ပလပ်
ပီတာလည်းအဖုတ်ကြီးမှာ ဖောင်းကားနေပြီး အတောင်ပင်လုပ်ချင်စရာကောင်းတာမို.အစိအားလှန်ကာအားရပါးရ လျက်ပေးနေပါသညိ။
ရီဝေလည်းဖီးတွေတက်ကာ ညည်းတွား နေပါတော.သည်။
ကုတင်က၁ခုတည်းဖြစ်သဖြင်.ဘေးမှ မူးပြီးအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသူ ကျော်ကျော်လည်းအတိုင်းသားကြားနေရပါသည်
ပီတာ၏မှုတ်ချက်များကြောင့် ရီဝေဖီးတက်နေတာကိုကြည့်ပြီးကျော်ကျော်လည်း လီးတောင်ချင်သလိုဖြစ်လာပါတော.သည်။
အား အား ရှိး ပလပ် ပြွတ် ပလငပ် အား အား ပလပ် အားကောင်းနေပြီ ပီတာရယ် ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အားအား
ပီတာလည်းအစိကိုလျက်ကာ အဖုတ်အတွင်းသို.လည်း သူလျာ ကြီးဖြင့်ထိုးသွင်းကာ အစွမ်းအးကုန်ပြုစုပေးနေပါသည်။
ရီဝေလည်းဖီးတက်ကာ အား လျက်ပေးပါ ပီတာ ကောင်းနေ ပြီး အား အားပလတ် ပလပ် ပလပ် ပြွတ် စွပ် အား ကောင်းလိုက်တာ
ပြီး ပြီကျွန်မပြီးပြီဟု ဆိုကာ ကာ မအထိတ်အထိပ်သို ရောက်ပြီး အရည်များစီးကျလာပါသည်။
ပီတာလည်း ရီဝေ အရည်များအားလျက်ပေးကာ ထထိုင်လိုက်ပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီအားချွတ်ပေးလိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်း ပီတာ ဘာလို ချငိသည်အားသိ၍ထူးထောက်ထိုင်ကာ ပီတာ အောက်ခံဘောင်းဘီအားချွတ်ပေးလိုက်ချိန်တွင်တော.
ဘောင်းဘီ အတွင်းမှ ဖောင်းကနဲထွက်လာသော ပီတာ လီးကြီးမှာ ကြောက်စရာ.ကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားပြီးအကြောများမှာလဲ ထောင်ထနေပါသည်။
လီးကြီးမှာမဲပြောင်နေကာ မြင်းလီး လောက်ရှိလေသည်။ရီဝေသာ မက ကျော်ကျော်ပင်လန့်သွားရပါတော.သည်၊
ကျော်ကျော်လီးနှင် ဆို ၃ဆလောက်ရှိပေမည်။
ရီဝေထင်ထားသည့် ကြီးမားပါသည့် ဆိုသည့် ဦးထွန်းထွန်းလီးတောင် ပီတာ လီးနှင့်ယှဉ်ကြဘ့်တော.ဘာမှမဟုတ်သလိုဖြစ်နေတော.သည်။
ရီဝေလည်း လီးကြီးအားကြည့် ကာ ပါးစပ်ကမနေနိုင်ပဲ ငုံစုပ်လိုက်ပါတော.သဘ်။
ရီဝေလည်းပီတာ ဒစ်ကို စငုံလိုက်ပြီးလျှာဖျားလေးနှင့်ဒစ်တဝိုက်ပတ်လည်အားလျက်ပေးနေပါတော.သည်။
လီးကကြီးလွန်းတော.ပါးစပ်ထဲမှာလည်းအပြည့်ဖြစ်နေပါသည်။ရီဝေအာခေါင်ကိုလီးကလာထောက်တဲ.အထိစုပ်ပေးတာတောင်ပီတာလီးကြီးတဝက်လောက်အထိပုံ ငုံမိပါသည်။ရီဝေလည်း ပါးစပ်နှင်ဝြင်သလောက်ပဲ လီးမဲကြီးအားစုပ်ပေးကာ ပါးစပ်နှင်.ဂွင်းတိုက်သလို အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးတော.ပီတာလီးကြီးမှာ မာတောင်လာပါတော.သည်။
ရီဝေလည်းစုပ်ရင်းကနေ ဂွေးဥ၂လုံးအားလက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ကစားနေပါသည်။
ပီတာလည်းဖီးတက်ကာ အီး အီး အား အားနှင့် အော်နေလေသည်။
ရီဝေလည်းဥစုပ်ပေးနေရာကနေရပ်လိုက်ပြီး ပေါင်ခြားထဲဝင်ကာဂွေးဥနှင့် စအိုကြားနေရာကို လျာဖြင့် လျက်ပေးလိုက်ရာ
ပီတာလည်း အားရှီး သေပါပြီ ကောင်းလိုက်တာဟု ညည်းတွားနေပါသည်။
ပီတာလည်းစိတ်ပါကာ လိုးချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် ရီဝေ ပက်လက်လှန်ပြီးဒူးကွေးပေး လိုးတော.မယ်ဟုပြောလိုက်ပါတော.သည်။
ရီဝေလည်းပီတာအလိုကျနေပေးလိုက်ရာ စော်က်ဖုတ်ကြီးမှာ ပြူးလာပြီးပီတာအကြိုက်ဖြစ်နေပါသည်။
အား ဖြေး ဖြေးနော် ပီတာ အရမ်းကြီးတော.ကွဲသွားမှာစိုးလို.
ပီတာလည်း ဖြေးဖြေးခြင်းထည်. ကာ လီးကို အသွင်းအထုတ်စလုပ်ပါတော.သည်။
ပြွတိ ဗျစ် ဒုတ် အား ပြွတ် ဖွတ် အား ဟင်း အား
အား ပီတာ ဖြေးဖြေး အား အားလား
အား ဗြစ် ဗြစ် ဖတ် ဖတ် ဖလွတ် ပြွ်တ် အင်း ဟင်း ကျွတ် ပျွတ် အား အ
ပီတာလည်း လိုးလို.ကောင်းလာကာ အမြန်ဆောင့်ပါတော.သည်။
အား အား ပြွတိ ပြွတ် ဒုတ် အား သေပါပြီ
ပီတာလည်း အပီအအြုပပင်လိုးနေကာ တခါတခါ သူလီးကိုအဆုံးအထိထုတ်ပြီးတဟုန်ထိုးလိုးသွင်းနေပါတော.သည်။
ဗြစ် … ဗြစ် …. ဖြစ် …. ပြွတ် …..ဖွတ်… ဘွတ်…အ.. အ. အင့်
လီးတချောင်းလုံး ဝင်အောင်တရှိန်ထိုးပြန်ဆောင်.သွင်းလိုက်တော. ရီဝေလည်း
ဗြစ် ဗြစ် အ အ .. ဒုတ် ဒုတ် … အ . အား လား အမေ.
ရက်စက်လိုက်တာပီတာရယ် လီးအကြီးကြီးနဲ.အဲဒီလိုဆောင့်လိုးမှတော. လီးကြီးဆောင့်လိုးတဲ.အရှိန်ကြောင့်
ရီဝေအဖုတ်တခုလုံးကြိမ်းစပ်ပြီး သားအိမ်လည်း အောင့်သွားကာ မျက်လုံးများပင်ပြာသွားပါတော.သည်။
ပီတာလည်း ဘယ်လောက်တောင်တင်းနေလဲမသိခေါ.မလိုးပဲ တရစပ်စောင့်လိုးနေပါသည်။
ပြွတ် ပြွတ် အ ဟင်း ဒုတ် ဖတ် ဖတ် အားအိ … အားဖပ်ဖပ်
အား ဒုတ် အ အွန်. အား အား သေပြီ
ဖပ် ဖပ် ဖပ်
ပီတာ ရဲ. ဥတွဲတွဲ ကြီးက ရီဝေရဲ.စောက်စိလေးကို တဖတ်ဖတ်နဲ.လာရိုက်တော.ရီဝေလည်း ဖီးတွေတက်လာပါတော.သည်။
ပီတာလည်းအားရပါးရလိုးပြီးညောင်းလာသဖြင့် ပတ်လက်လှန်ပေးကာ ရီဝေအားအပေါ်ကတက်စောင့်ခိုင်းလိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်းအဖုတ်ဝမှာ ဒစ်ကိုတေ.ကာ တဖြည်းဖြည်း ထိုင်ချလိုက်ပါသည်။
လီးကြီးက လုံးပတ်တုတ်တော. အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားကိုပွတ်သပ်ပြီး
တဗြစ်ဗြစ်နဲ.အဖုတ်ထဲ ကို တစ်ဆို.ထိုးခွဲနေပါတော.သည်။
ဗြစ် ဗြု ဗြွတ် အား အ အားလား
ပြွတိ ပြွတ် စွတ် ဖပ် ဖပ် အ အ အား
လီးတဆုံးဝင်ပြီးနောက်မှာတော. ရီဝေလည်းလက်နောက်ပြန်ပစ်ကာ ကုတင်ပေါအားယူပြီး
ဘေးမှ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသော.ကျော်ကျော်မှာ သူမိန်းမရီဝေအခုလောက် တဏှာစိတ်ကြီးမှန်းမသိပေ။
ရီဝေလည်း ဘေးသို.ကြည့်လိုက်ရာ ကျော်ကျော်ကြည့်နေသည့်အခိုက်နှင့်ကြုံတာမို.မိမိအလိုးခံနေရပုံကို ယောကျာ်းတွေ.နေသဖြင့်ကာမစိတ်ပိုကြွကာ အားရပါးရကို အပေါ်ကစောင့်နေမိပါသည်။
ဗြစ် .. ဘွတ် … ပလွတ် ..ဖွတ်… ဗြစ် … အား အား…..အင့်…..အ ..ယ.အအ….အ
အား ရှီး ဖွတ် ပြွတ် အ….. အ
ပီတာလည်းရီဝေတင်ပါး ၂ဖက်ကို လက်နဲ.ပင့်ပြီး တင်ပါးကို ပိုပို မြောက် သွားအောင်လုပ်ပေးနေသဖြင့်
ပြွတိ ပြွတ် အီး …. အိ ….. အီး … အု အု အ အ ..အား အားလား….
ဒုတ် ဒုတ် အ ..အ… အ..±အား လား….
ပီတာလီးကြီးက သားအိမ်ကို သွားသွားစောင့်နေတော. ရီဝေအဖို့တော. အီစိမ်.နေပါတော.သည်။
အဲလိုလုပ်ရင်းနဲ.ပီတာက ရီဝေပေါင်၂လုံးကို ရင်ဘတ်နဲ.ထိအောင်သူ.လက်နဲ.ဆွဲကပ်လိုက်ပါသည်၊
ပီတာ က လိုးအားကောင်းပြီးအချက်တိုင်း ထိထိ မိမိဖြစ်အောင်ပင်.ဆောင့်လိုးနေပါသည်။
လိုးချက်တွေက ပြင်းထန် ကာအားပါနေပါတော.သည်။
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖွတ် ဖွတ်….အင်း ….အ ..ယ အ..ယ. အိ အိ အု
ပလွတ် ဗွတ် ဗြစ် အား အား…… အ မေ. …..အ ..အ
အချက် ၇၀လောက်စောင့်ပြီးချိန်မှာတော. ရီဝေလည်း စိတ်ပါကာ ပြီးသွားပါတော.သည်။
အား အား အားရှီး ကောင်းလိုက်တာ ပီ တာ ရယ် အ အ အ ပြီး…ပြီး ပြီ အ
ရီဝေပြီးသွားသော်လည်း ပီတာ ကမပြီးသေးပဲ ရီဝေအားကြမ်းပြင်ပေါ်လေးဖက်ထောက်ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ခိုင်ပြီး
စွပ် စွပ် ….အား ဗြစ် … ပြွတ် ….. ဖွတ်
အား ဟင်း အား…. အမေ….. အား ဟင်း ရှီး
ပီတာလည်း မြန် မြန် ဆောင့်လိုက် အရှိန်လျော.စောင်.လိုက် လီးကို အပြင်ထုတ်ပြီး တချက်ချင်း အဆုံးစောင်.သွင်းလိုက်နှင့် နည်းပေါင်းစုံနှင့်လိုးနေတော.သည်။
ပီတာလည်းရီဝေခါးကိုကိုင်ပြီး တစက်မှမနားပဲ ဒလကြမ်းကိစြောင့်လိုးနေတော.သည်။
ဘွတ် ဘွတ် ဆိုတဲ.အငံတွေက ဆူညံနေပါသည်။
တအောင့်လောက်နေတော.ပီတာလည်းဆောင့်ချက်တွေ့မြန်လာပြီး ရီဝေကို တလကြမ်းဆောင့်လိုးနေရာကနေ
သူလီးကြီးကို အဖုတ်ထဲကနေပြွတ် ကနဲ ရုတ်တရက် ဆွဲထုတ်လိုက်ပါသည်။
နောက် ရီဝေမျက်နှာနားလာရပ်ပြီးသူ.သုတ်ရည်တွေကိုရီဝေမျက်နှာပေါ် ပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ရီဝေလည်းဘယ်လိုမှထင်မထားတော.မျက်နှာ တခုလုံး ပီတာ သုတ်ရည်ပြစ်ပြစ် ပူပူနွေးနွေးတွေပေကျံကုန်ပြီး ပါးစပ်ထဲလဲ တဝက်ဝင်ကုန်ပါတော.သည်။
ရီဝေလည်းမထူးတော.ဘူးဆိုပြီး ပီတာလီးထိပ်မှာ ပေနေတဲ.အရည်တွေကိုလျာနဲ.ကုန်စင်အောင် ယက်လိုက်ပြီး
လီးကြီးအားငုံစုပ်လိုက်ပါတော.သည်။ အားပြင်းပြင်းနဲ.စုပ်ပေးလိုက်တော.ပီတာလည်း တအီးအီးနဲ.သုတ်ရည် နောက်ထပ်နဲနဲပါးစပ်ထည်းပန်းထွက်လာပါတော.သည်။
အား အား အီး ကောင်းလိုက်တာ ရီဝေရာ
ပီတာလည်းတချီလိုးပြီး၍ ဘေးဘက်သို.ကြည့်လိုက်ရာ ကျော်ကျော်မနိုးသေးသဖြင့် နောက်တချီထပ်လိုးရန် စိတ်ကူးပေါ်လာလေတော.သည်။
ဒီလောက်လိုးလို ကောင်းနေတဲ.အဖုတ်ကိုလိုးရမှာ မတောင်ပဲနေမလား
လီးထိပ်မှာတွဲနေတဲ.အရည်တွေကိုလျာနှင်.ရက်လိုက်ပြီးလီးတန်အရင်းကနေကိုင်ကာ လီးကို ပါးစပ်ထဲအသွင်းအထုတ်စလုပ်ပါတော.သည်။
ပီတာလည်းဖီးတက်လာပြီး ရီဝေခေါင်းကို လက် ၂ဖက်နှင့်ကိုင်ကာပါးစပ်ထဲအတင်းလိုးပါတော.သည်။
ဗြစ် အွတ် ဗြစ် ဒုတ် ဒုတ် ပြွတ် အင်း အ ဟင်း
ရီဝေလည်းပီတာလီးကကြီးလွန်းတာမို.ဖြေး ဖြေးခြင်းထိုင်ချနေတာကို ပီတာ ကအားမရလို.အောက်ကနေပင့်လိုးလိုက်တော.
ပီတာလည်းအပေါ်ကရီဝေဆောင့်ပေးတာကို မစောင်တော.ပဲ အောက်ကနေ
ဖတ်.. ဖတ် … ဖွတ် စွတ် ပြွတ် အင့် အ အ ဖတ် စွပ် စွပ် စွပ်စွပ်
အ အ ကောင်းလိုက်တာပီတာရယ် ဆောင့် ဆောင့်
ရီဝေအားမညှာတမ်းဆောင်လိုးနေရာ ရီဝေလည်း စိတ်ပါလာ ကာ ကောင်းနေပါတော.သည်။
ဒုတ် အ အ အမေ. အိုး ရှီး ဖွတ် စွတ် အင့် အ…အ
ပီတာလည်း ရီဝေစိတ်ပါလာပြီ ဆိုတာသိ၍ အသားကုန်ပင်ပင့်ဆောင့်ပေးနေပါသည်။
အချက်၅၀လောက်စောင့်ပြီး ပီတာ က ရီဝေကို လိုးရင်းတန်းလန်းက မတ်တတ်ရပ် ကာ.ချီလျက်အတိုင်းလိုးပြန်လေသည်။
ရီဝေလည်း ပီတာမြောက်လိုက်တိုင်း ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးမြောက်တက်သွားပြီး
ပြန်ပြန်ကျလာတော.တကိုယ်လုံးအားနှင့် ပီတာ လီးပေါ်ထိုင်ချသလိုဖြစ်နေကာ
ဘယ်လောက်တောင်ပီတာလီးကြီးက အဆုံးထိဝင်သွားမလဲဆိုတာ ပြော စရာမလိုအောင်ပင်ဖြစ်သည်။
ပီတာလည်း အခုလို သူလီးကြီးအဆုံးထိဝင်အောင် ကို ရီဝေအားတမင်ချီပြီးလိုးချင်းဖြစ် လေသည်။
အား စိ စွတ်… ပြွတ်ဗြွတ် …အင့် အ အ…..ဗြစ် ဒုတ် ဒုတ် အား လား သေပါပြီ
ရီဝေလည်း လီး ကြီး က ဝင်ချက်ပြင်း လွန်း၍ အရမ်းကို နာကျင်နေ လေသည်။
လီး ကြီး ကြီး များနှင့် လိုး ခံထားဖူး၍သာ တော် သေးသည်။
မဟုတ်ရင်ဖြင့် ပီတာ ဆောင့်ချက်များကို ခံနိုင် လိမ့် မယ် မထင်ပေ။
တကိုယ်လုံးအားနှင့်ပီတာ လီးပေါ်ထိုင်ချရတော.အချက်တိုင်း က သားအိမ်ကို လာဆောင့် ကာအီစိမ်.နေပါတော.သည်။
ကိုယ်က အပေါ်ကစောင်.သလိုမျိူး လိုသလောက် လီး အဝင်အထွက်ကို ချိန်လို.မရ တော.ပဲ အချက်တိုင်း တဆုံးဝင်နေပါတော.သည်။
အား အား ရှူး ဒုတ် ဒုတ်အား အား လား သေပါပြီ
၅မိနစ်လောက်ချီကာ ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးပြီးနောက် ပီတာ က ရီဝေအားကုတင်စောင်းပေါတင်ကာ
အပေါ်စီး က အားရပါးရကို လိုးဖို.နေရာယူကာ ရီဝေ ခြေထောက် တဖက်ကို တွန်း တင်လိုက်ပြီး
သူ လီးကြီးထည့် ကာ စောင့် လိုးပါတော.သည်။
ဗြစ် ဒုတ် ဗြစ် … ဗြစ် ဘွတ် ဘွတ် အား ပြွတ် စွတ် ဖွတ် အ အ အင့်
ကြီးမားသည့် လီးကြီးအား အရှိန်နှင့် လိုးသွင်းမှတော.ရီဝေမှာ လည်း တော်တော်ကို နာနေပါတော.သည်။
အချက်ပေါင်းများစွာ အလိုးခံပြီးနောက် ရီဝေလည်း စိတ်ပါလာကာ ပြီး ချင်လာပါတော.သည်။
ပီတာ ဆောင့် ချက်များကြောင့် ရီဝေလည်း ကုတင် စွန်း ကနေ တဖြည့်း ဖြည်း ရွေ.လာ ကာ ကျော်ကျော်အား သွားထိနေပါတော.သည်။ပီတာလည်း ကျော်ကျော်ကိုပင်သတိမထား မိတော.ကာ အသားကုန်ပင်စောင့် လိုး နေပါတော.သည်။
ကျော်ကျော်လည်း သူ.မိန်းမကို ပီတာ အသားကုန် လိုးနေတာ ကို မြင် ရ ကြားနေရ၍ လီးမှာ မာတောင်နေတုန်းပီတာ
ဆောင့် ချက်ကြောင့် ရီဝေ က သူအနားရောက်လာကာ ရီဝေခေါင်း က သူ လီးအား လာထိနေလေသည်။
ရီဝေလည်း ကျော် ကျော်နှင်ထိမိ ပြီးကျော်ကျော် လီး လည်း တောင်နေ သဖြင်. ကျော်ကျော်အားသနားကာ ပုဆိုးဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ကာ သူလီးအား ဂွင်းထုပေးလိုက်ပါတော.သည်။
ပီတာလည်း ရီဝေလုပ်ရပ်ကြောင့် အံသြ နေသော်လည်း အခြေအနေကို သဘောပေါက်ကာ
ရီဝေအား လေးဖက်ပြန်ထောက်ခိုင်းကာ ကျော်ကျော် လီးအားကိုင်ခိုင်း စေပြီး သူကတော.နောက် ကနေ တရစပ်စောင့် လိုးနေပါသည်။
ကျော်ကျော်လည်း ဖီးတက်လာကာ ရီဝေကို ပီတာ လိုးတာကိုကြည်ပြီးရီဝေကသူ.အား ဂွင်းထုပေးနေသဖြင့်စိတ်ပါကာ ပြီးချင်လာလေသည်။
ပီတာ လည်း ကျော်ကျော်က ဘာမှမပြောသည့် အပြင် လိုလားဟန်ပါပြသဖြင့်
သူ.ယောကျာ်းရှေ.တွင် သူ မိန်းမအား အသားကုန်လိုးးးနေရခြင်းမှာလည်းဖီးတမျိုးဖြစ်ကာ ပီတာ စိစ
ပီတာလည်း အသားကုန်ဆောင့်လိုးနေရာ ရီဝေလည်း စိတ်ပါလာပြီး ဆောင့် ဆောင့် ပီတာဟုပြောကာ ရီဝေလည်း ပြီးသွားပါတော.သည်။
ကျော်ကျော်လည်းရီဝေအဖြစ်က်ု ကြည့်ရင်း မနေနိုင်တော.ပဲ သုတ်ထွက်သွား ကာ ရီဝေလက်ပေါ်သို့ ပေကျန်ကုန်ပါတော.သည်။
ပီတာကတော.မပြီးသေးပဲ အချက် ၃၀ လောက်စောင့် ပြီးမှ
အား အား ပအား ရှီး ပြွတ် ဗစ် ပြွတ် အား အားတ
ဟုအော်ကာ ရီဝေအဖုတ်ထဲ သုတ်ရည်များပန်း ထုတ်လိုက်ပါတော.သည်။
ပီတာလည်းပြီး သွား ၍ ရီဝေအဖုတ်ထဲမှသူလီး ကြီးအား ချွတ်ကာ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ကာ
ကျော်ကျော်လည်း ဖြစ် ပြီးတော.မတက်နိုင်ဘူးလေ
ရပါတယ် ပီတာရယ် , ဒါပေမယ့်မင်း ကအတင်းလုပ်တော.ငါ.မိန်းမဟာလေး ပြဲ ကွဲကုန်ပြီလားမသိဘူးဟုပြောကာရီဝေအဖုတ်အား သွားဖြဲကြည်.လိုက်တော.
အဖုတ်ကြီးမှာ လရည်များ ပြည့် လျံနေကာ အပေါက်မှာ တော.တော် တော်ကျယ်သွားပါသည်။သ
ပီတာ လည်ဆောရီးပါသူငယ်ချင်းရာ ဟုပြောပြီး ကျော်ကျော်အား ထပ်တောင်း ပန်ကာ ပြန်သွားပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း ပီတာ လိုးဒဏ်ကြောင့် မျော.မျော.ပဲကျန်ကာ အိပ်ပျော်သွား ပါတော.သည်။
ဒီလိုနှင်.ပီတာနှင်. လုပ်ပြီးနောက် ရီဝေလည်း သားအိမ်က အောင့် နေ၍ ဆေး ခန်းပင်ပြလိုက်ရပါတော.သည်။
နောက်ရက်များတွင်ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်သွား ပြီးရီဝေလည်း ကာမစိတ်များ ထကြွလာပါတော.သည်။
ကျော်ကျော် ကပုံမှန်လိုးပေးသော်လည်း ရီဝေမှာ အာသာမပြေပဲ လီးကြီး ကြီးများကိုသာတောင့်တနေပါတော.သည်။
တနေ. တရီဝေလည်း စိတ်ပြေလက်ပျောက် ဆုမွန်တို.အိမ်သွားလည်မည် လို စဉ်းစားပြီး taxi ဌားပြီး ထွက်လာခဲ.လေသည်။
ဆုမွန်အိမ်သို.ရောက်တော. ဆုမွန် အိမ်၌မရှိသဖြင့် ရီဝေလည်း စိတ်ညစ်ပြီးအိမ်ပြန် ရန် ကားဂိတ်သို.သွား၍ ကားဌားနေပါတော.သည်။
နေ.လည်ဘက်မို.ကားကရှားနေလေသည်။ ထိုစဉ် ရီဝေနားသို. Taxi တစီးထိုးရပ် လာလေသည်။
Taxi ယာဉ်မောင်း ကရီဝေအား ခြေဆုံးခေါင်း ဆုံးကြည့် ကာ ညီမ သွား မလားဟုပြောတော. ရီဝေလည်းအင်း ဟုပြောကာ ကားပေါ်တက်လိုက်လေတော.သည်။
ကားပေါ်ရောက်တော. ယာဉ်မောင်း အဖိုးကြီး က ဘယ်ဈေးလဲ ဟု ရီဝေအားမေးလေသည်။
ရီဝေလည်း ကြောင်သွား ကာ ဘာကိုလဲ ဘာကို ပြောတာလဲဟုမေးလေသည်။
အဖ်ုးကြီးလည်း ရှက်မနေပါနဲ.ညီမရာ.ဈေးပြောပါ အစ်ကို ကဧည့်သည်ဆီပို.ပေးရမှာ
ဘာ ဘယ်လို ပြောတယ် ဘယ်ကဧည့်သည်လဲ
ရီဝေမေးတော. အဖိုးကြီး က ညီမနဲ.နေမယ့် လူလေ ,သူ.ကိုဈေးပြောရအုံးမှာ
ရီဝေလည်း အခုမှပင် သဘော ပေါက်လေတော.သည်။ယာဉ်မောင်းအဖိုးကြီးကသူ.အား မကောင်းသည့်မိန်းမထင်၍ ခေါ်တင်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ထိုအသိက ရီဝေကို ရမက်စိတ်များနိုးကြွားလာစေသည်။
သူ တောင့် တနေသော ကာမအရသာကို ပေးနိုင်မယ့်သူကို မရှာရပဲ ရနေလေသည်။
ပြီတော. ဒီလို ဇိမ်မယ်အမှတ်ဖြင့်ခေါ်ပြီး လိုးကြတာကလည်းအတွေ.အကြုံ အသစ်တခုဖြစ်နိုင်လေသည်။
သည်စကားကို ရီဝေ တော်တော်ကြီးကို ကြိုးစား၍ပြောလိုက်ခြင်းပင်။
ဘဝမှာ တစ်ခါမှအခုလိုမပြော ဘူးပေ။
အဖိုးကြီးက ပုံမှန်ဆို ငါးသောင်းပေါ.
မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ.ညီမရာ အစ်ကို က ကြားကချိတ်ပေးရတာပါ
အင်းလေ ငါးသောင်းဆိုလဲငါးသောင်းပေါ. ကူညီပေးရမှာပေါ. အခုကဘယ်ကိုသွားမှာလဲ
သာကေတ ဘက်လေ။ အဲဒီမှာ သူစောင့်နေတယ်။
ညီမလိုက်ခဲ. အပေါ်ကို သွားရမှာ
ရီဝေလည်း အဖိုးကြီးခေါ်ရာနောက်သို့လိုက်ခဲ လေသည်။
အခန်းတွင်းသို.ရောက်တော. အသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ထိုင်နေကာ ရီဝေအားတွေ.တော. ရမက်ခိုးထန်သည့်မျက်လုံးဖြင့်ကြည့်ကာ
ကျော်ကြီး ဆော်ကမိုက်လှချည်လား ဘယ်က မလာတာလဲဟု taxiကားသမားအားမေးတော. Taxiသမား ကဒီလိုပဲလေ ကွာရှာရတာပေါ.
ငါးသောင်းတဲ. အိုကေ အို ကေ ပေးတာပေါကွာ ဒါမျိုးမလုပ်ရတာကြာပြီ
ထိုလူကြီးလည်း ရီဝေအား အခန်းထဲသို့.ဆွဲခေါ်သွားပါတော.သည်။
အခန်းထဲရောက်တော.အဖိုးကြီးက ကဲ လုပ်ငန်းစရအောင် အကျီချွတ်ပေတော.ဟုရီဝေအားပြောလေသည်။
ကျောပြင် သားတွေဟာ ဖြူဝင်း နေလို.အဖိုးကြီးကြည့် ကာ စိတ်တွေထနေပါသည်။
အဖိုးကြီးမျက်နှာမှာအဆီတွေပြန်လာကာ မျက်လုံးကတော. တပ်မက်တဲ.ဆန္ဒအရှိန်နဲ.
ရီဝေလည်း စကပ်ပါချွတ်လိုက်တော. အဖိုးကြီးလည်း မနေနိုင်တော.ပဲ ရီဝေအောက်ခံဘောင်းဘီကိုပါ အတင်း ဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်။
ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသော ရီဝေတကိုယ်လုံးကို အဖိုးကြီး မျက်လုံးကျွတ်လုနီးပါး အားရပါးရကြည့်နေလေသည်။
ဖွံဖြိုးတောင်.တင်းလှသည့် ဒီလို ကောင်မလေးမျိုးအား မလိုးရသည်မှာကြာချေပြီ။
ရီဝေပေါင်ရင်းခွဆုံမှ ခုန်းမောက်ဆူဖြိုးနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရလေသည်။
အဖိုးကြီးလည်းထိုင်နေရာမှမတ်တက်ရပ်ပြီး သူဝတ်ထားသောပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်လေသည်။
ကာမစိတ်တွေထနေချိန်မို. လီးတန်ကြီးသည် မတ်တောင်နေလေသည်။
အဖိုးကြီး က. လာ .. ငါ.လီးကိုစုပ်ပေးစမ်း
အဖိုးကြီးက ကြေးစားမိန်းမ များအားခေါ်ာူပျော်ပါးနေကြဖြစ်၍ အရသာခံတက်လေသည်။
ရီဝေလည်း အဖိုးကြီးအား ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲလိုက်လေသည်။
လီးကြီး အရေပြားကို အောက်သို.ဆွဲချကာဒစ်ဖော်ပေးပြီး ပါးစပ်ဟပြီးလီးကို ငုံလိုက်လေသည်။
အဖိုးကြီးသည် လီး ကို ဆေးမထားတော အနံ.ကပြင်းနေလေသည်။
အား ရှီး အား အား
လီးဒစ်ကြီးကရီဝေပါးစပ်နှင့်ပင်မဆန်.ချင်ပေ။ရီဝေလည်း ပါးစပ်ထဲတွင်ရှိနေသည့်လီးဒစ်ကြီးကို လျာဖြားလေးဖြင့် လှည့်ပတ်ကာရက်ပေးနေတော.အဖိုးကြီးလည်း ဖီးတက်ကာ ရီဝေခေါင်းကို ကိုင်ထားပါတော.သည်။ရီဝေလည်းစုပ်ပေးနေရာမှ အဖိုးကြီးအား
ကြာကြာစုပ်ပေးလျင် ပါးစပ်ထဲ သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်ကုန်မည်စိုး၍ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်ကာ
အဖိုးကြီးလည်း ရီဝေစိတ်ကြွနေမှန်းသိသည်။ရီဝေစိတ်ကြွမှသူ အသားကုန်လိုးဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပေသည်။
တံတွေးများပေကျံနေသောသူ.လီးကြီးအား ရီဝေ စောက်ဖုတ်ဝတွင်တေ.ကာ အစိကို ဒစ်နှင့်ပွတ် နေတော.သည်။
ရီဝေလည်း စိတ်ပါကာ အစ်ကိုကြီး လုပ်တော.လေ ဟင့် ဟုပြောလိုက်ပါတော.သည်။
အဖိုးကြီးလည်း ရီဝေနို.အားလက်ဖြင်.ကိုင်ဆွဲပြီး လီးကြီးကို တအားပင်ဆောင့်သွင်းလိုက်ပါတော.သည်။
ပလစ်… ဗျစ်… ဒုတ် အား အား အင်း
အမလေး အား နာလိုက်တာရှင် အား
လီးကြီးကအတော်ပင်ရှည်တော. စောက်ခေါင်းတခုလုံး တင်းကြပ်၍ လီးထိပ်က ရင်ခေါင်းပင်လာထောက်နေလေသလားပင်ရီဝေစိတ်ထဲထင်မိလေသည်။
အဖိုးကြီး လည်းရီဝေနို.အားအားရပါးရဆွဲကာ ဆောင့်လိုးနေပါတော.သည်။
ဖာသည်လို.ထင်နေသောကြောင့် လုံးဝညှာတာမှုမရှိပဲ စိတ်တိုင်းကျ အားရပါးရလိုးနေပါတော
ဗျီ ပျွပ် စွတ် စွတ် .. အာ . အိ… အာ .. ဟင့် …. ကောင်းတယ် စောင့် စောင်.
ရီဝေလည်းကိုယ့်ကို ကိုယ် ဖာသည်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အဖိုးကြီးကလုပ်နေသဖြင့် အရှက်မရှိတော.ပဲအသံပေး အလိုးခံနေပါတော.သည်။
ဗျစ် ပြွတ် ဖွတ် သွပ် စွပ် အင်. အ အ
အား အီး ပြွတ် ဗျစ် ဒုတ် ဒုတ် အား လား.
ကောင်းလိုက်တာဟာ ငါလုပ်ဖူးသမျှဖာသည်တွေထဲမှာတော.နင်.အဖုတ်က အကောင်းဆုံးပဲ ဒီလို အဖုတ်မျိုးကတော
အဖိုးကြီးလည်း ရီဝေအား ဖာသည်ထင်၍ လုပ်နေရသော်လည်း ချောမောပြီး တောင့်တင်းသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် လိုးရတာ အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေပါတော.သည်။
ဗျစ် ဗျစ် ဗြွတ် အင့် အ ပြွတ် စွတ် ဖတ် ဖတ် အင် .အ အားလား
ကဲ ညီမ အပေါ်ကတက်လိုးပေးဟုဆိုကာ သူ လီးကြီးအားပတ်လက်လှန်ကာထောင်ပေးလိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်းအချိန်မဆိုင်းပဲ လီးကြီးအားကိုင်ကာ အဖုတ်ဝတွင်တေ.ကာ ထိုင်ချလိုက်ပါသည်။
ဗြစ် ဗြစ် ပြွတ် .. အ ဒုတ် ပြွတ် စွတ် … စွတ် အ အ ဗျိ ဗျိ…..
ဖတ် ဖတ် ပြွတ် စွတ် ရှူး ရှူး အား ဖြန်း ဖြန်းဖြန်း အ အ နာတယ် ဖြန်း… ဖြန်းပြွတ် အ အ ဖြန်း
.အဖိုးကြီးလည်း ရီဝေတင်ပါး အား လက်နှင်.ရိုက်ကာ.အောက်ကနေပင့် လိုးပေးနေပါသည်။
ရီဝေဖင်လည်းအဖိုးကြီး လက်နှင့် ရိုက်သောကြောင်. နီရဲကာ.ရီဝေစိတ်ထဲတွင်တော. ဖီးတမျိုး ဖြစ်နေပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း အပေါ်ကစောင့်နေတဲ.အရှိန်ကိုနည်းနည်း မြန် လိုက်ပြီး လီးကြီးကို အဖုတ်ထည်းပိုဝင်အောင်လမ်း ကြောင်း ပြောင်းပြီး စောင့် ပေးနေပါသည်။
အား အ ကောင်း လိုက်တာ ဟာ နင်ကအပေးလည်း ကောင်းတယ် နင်.ကိုတော.ကြိုက်သွားပြီ
ရီဝေလည်း အဖိုးကြီးနှင်.ရင်ချင်းအပ်ပြီးသူ.ခါးအားနှင့်တင်ပါးကိုအပေါ်အောက်လှုပ်ရှားပြီး လီးကြီးပို အဝင်နက်ရန် ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်ပေးနေပါတော.သည်။
တောင့်တင်းပြေပြစ်သော ကောင်မလေးအား လိုးနေရသည်ဖြစ်၍ အဖိုးကြီးလည်း ရမက်တွေထန်သည်ထက်ထန်လာပါသည်။
ဆောင်.ချက်များကလည်း ပိုမြန်လာကာ အေက်ကပင့်ဆောင်.ပေးနေသော.အဖိုးကြီးအတွက်အရသာရှိလှသလို အပေါ်ကဆောင်.ပေးနေသောရီဝေလည်း အရသာတွေ.နေပါသည်။
ဘွတ် ဘွတ် ဒုတ် ဒုတ် အ အ အားလား ကောင်း လိုက်တာ အကို ရယ် အား ရှီး အား
အား အား ကျမပြီး တော.မယ် အစ်ကို ဆောင်.ပေးပါ အား အား အား
အားရှီး အား ဘွတ် ဘွတ် ဒုတ် ဒုတ် ဘွတ်
ရီဝေလည်း ကာမအထွတ် အထိပ်ရောက်ကာ ပြီးသွားလေသည်။
အဖိုးကြီး ကတော.မပြီးသေးပဲ အောက်ကနေ ပင့်ဆောင့်နေပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း အရမ်းကောင်းနေပြီး အဖိုကြီး က လိုးရှိန်တင်လိုက် တော.လီးကြီးအား အဖုတ်နှင့်ညစ်ပေးကာ
အဖိုးကြီးလည်း စိတ်ပါလာ ကာအသားကုန်ပင် ပင့်လိုးနေပါသည်။
ရီဝေလည်း အပေါ်ကနေပြီး အား ကောင်းလိုက်တာ အစ်ကိုကြီးရယ် စောင့် ပါ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး.
အ အ အင့် အ ဗြစ် ဒုတ် အ အ အ အားလားရှီး ရှီး
အဖိုးကြီးလည်း အချက်၂၀ခန်. ဆောင်.လိုးပြီး ရီဝေအဖုတ်ထဲသို.သုတ်ရည်များပန်းထုတ်လိုက်ပါတော.သည်။
အား အား ကောင်း လိုက်တာ အား ပြစ် ပြစ် အား အား အ
နင့်ကိုလိုးရတာကောင်း လိုက်တာဟာ. နောက်လဲခေါ်လိုးအုံးမယ်သိလား
အဖိုးကြီး လည်း ကျေနပ်နေကာ နောက်တခါလိုးဖို. အတွက် ပြောနေပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း ညစ်ပတ်နေသည်များကိုသန်.စင်ပြီး အဖိုးကြီး ဆီမှပြန်လာခဲ.လေသည်။လမ်းထိပ်တွင်ခုနသူ.ပေး.သော taxi သမားကြီးအားတွေ.သဖြင့် သူ.ကားကို ပင်ဌား ကာ အိမ်ပြန်ခဲ.လေတော.သည်။လမ်း၌taxiသမားကြီးက အစဉ်ပြေလား ညီမဟုမေးတော.
ပြေရင်အစ်ကို ကို လည်း ကျေးဇူး ဆပ်အုံးလေ
ညီမဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ပြော လေ
အာ ရပါတယ် အစ်ကို က ပိုက်ဆံမလို ချင်ပါဘူး
၁ ခါလောက် ပေးလုပ်ရင် ရပါပြီ, ညီမကလုပ်ချင်စရာကြီး မို.လို.
ရီဝေလည်း taxi သမား ပြောစကားကြောင်. အံအားသင့် ကာ
ဒီနေ.တော. အချိန်မရတော.ဘူး.အစ်ကို ရ နောက်နေ.ပေါ. အိမ်ပြန်ရအုံးမှာ
အာ မရဘူးညီမ ရ အစ်ကို တော်တော်တင်းနေပြီ ဒီမှာကြည့်ဟု ပြောကာ သူလီး ကြီးအားလှန်ပြလေသည်။
ရီဝေလည်း မှား ပြီးမှတော.မထူးပါဘူးဟုတွေးကာ အဲဒါဆိုလည်း မြန် မြန် နေရာ ရှာပြီးသွား ညီမက အချိန်မရတော.ဘူး ဟုပြောလိုက်လေသည်။
ရီဝေဆီက သွား လို.ပြောသည်နှင့် taxi သမားလည်း နီးစပ်ရာတည်းခိုခန်းသို့ မောင်းကာ အခန်းယူလိုက်လေသည်။
အခန်းသို့ရောက်သည်နှင့်ရီဝေအားအဝတ်များချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီး သူလည်း ချွတ်ကာ
သူ.လီးက သိပ်တော.မရှည်ဘူး လုံးပတ်ကတော.တော်တော်တုတ်တယ်
အရေပြား မဖြတ်ထားတော. ဒစ်ကြီး ကဖုံးနေတယ် ရီညေ်း ဒစ်ဖော်ပေးလိုက်ပြီး
လီးကြီးအားငုံစုပ်ပေးလိုက်လေသည်။ကျော်ကြီးဆိုသူ taxiသမားလည်းလီးတဝက်လောက်ရီဝေပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ညှောင်.ပေးနေလေသည်။
ရီဝေလည်းလီးချောင်းကြီးအဝင်ကောင်းစေရန်ပါးစပ်အား အလိုက်သင်ဟြပေးကာ ကျော်ကြီး သူ.ပါးစပ်ထဲလိုးသွင်းသမျှကို ခံနေပါသည်။
ကျော်ကြီးလည်းဖင်ပြောင်ကြီး တလှုပ်လှုပ်ဖြင့်စောက်ဖုတ်ကိုလိုးသလို ရီဝေပါးစပ်အားလိုးနေပါတော.သည်။
လီးကြီးကိုပါးစပ်ထဲသို.ခပ်ကြမ်းကြမ်း အသွင်း အထုတ်လုပ်နေရာယမ်းခါနေသော.လဥ၂လုံးက ရီဝေမေးစေ.သို့တဖျက်ဖျက် ရိုက်ခတ်နေပါသည်။ပါးစပ်ထဲသို့လီးအဝင်အထွက်တွင်လီးတန်ကြီးသည်နူးညံ.သောပါးစပ်နှင်.ထိတွေ.နေသည်မို.
ကျော်ကြီးလည်း မနေနိုင်တော.ပဲ ရီဝေအား
ကျော်ကြီးလည်း ထိုစအိုပေါက်လေးသို.တံတွေးထွေးချလိုက်တော. ရီဝေက ဖင်တော.မလုပ်ပါနဲ. အရှေ.ပဲလုပ်ပါ
ရှာမရှည်နဲ.ငါ က ဖင်ပဲကြိုက်တာ အဖုတ်ကလူတိုင်းလိုးပြီးသားဟုပြောတော.ရီဝေလည်း မညင်းသာတော.ပဲငြိမ်ခံလိုက်ရလေသည်။
အား ကျွတ် ကျွတ်နာတယ်
ဖင်ထဲသို့လီးဝင်နိုင်စေရန်လက်၃ချောင်းသွင်းပြီးချိန်တွင်တော.ကဲ ရီဝေ နင့်ဖင်ကချလို.ရနေပြီ လီးသွင်းဖို.ပဲကျန်တော.သည်ဟုကျော်ကြီးကပြောလေသည်။
အ အ အမလေး နာတယ်
ကျော်ကြီးလည်းရီဝေ ဖင်ကြီးကို ဖြေး ဖြေး ခြင်း စတင်လိုးပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း ဖင်ပေါက်ကိုလီးစသွင်းချိန်ကနာကျင်သော်လည်းဖင်ထဲလီးအဆုံးဝင်သွားပြီးဆောင့်သည့်အချိန်တွင်နာကျင်သေးသော်လည်း အရသာကတမျိုးဖြစ်လာနေပေသည်။
အင်းဟင်း ဟင်းအင်း ကောင်းလ်ုက်တာ အကိုရယ် ဆောင့်စမ်းပါ.နာနာလေး
အား ပါး ပါး အား ရှီး
အ အ ဗျစ် အ အ အား လား အမေ.
ရီဝေလည်း အမလေး ကောင်းလိုက်တာ.ကောင်းလိုက်တာ အား အဟုအော်ကာ ဖင်ခေါင်းဝက လီးကြီးအားညစ်ပေးနေတော.ကျော်ကြီးလည်းမခံနိုင်တော.ပဲ
အသားကုန်ပင်ဆောင့်လိုးနေပါတော.သည်။ ဗျစ် ဒုတ် ဒုတ် အ အ အီး အင်. အင့် အ အ
နည်းနည်းလောက် ကြာတော.ကျော်ကြီးလည်း ဆက်မစောင့်တော.ပဲတောင်မတ်နေသောလီးကြီးကို ရီဝေဖင်ထဲသို.သွင်းထားရင်း ဇိမ်ယူနေလေသည်။ရီဝေငြိမ်သွားသည့်အခါမှလီးကြီးကို ဖင်ထဲမှဆွဲထုတ်လိုက်လေသည်။
ဖွတ် ဘွတ် ပလွတ်
ကျော်ကြီးလီးကြီးဖင်ပေါက်ထဲမှထွက်လာတော.ရီဝေရင်ထဲဟာသွားလေသည်။သူဖင်ထဲသွင်းခဲ.သောလီးကြီးအားသေချာကြည့်လိုက်တော.လီးကြွးမှာအရည်များဖြင့်ပြောင်လက်နေလေသည်။ အစ်ကိုမပြီးသေးဘူးလားပြီး အောင်လုပ်လေဟုပြောလိုက်တော.ကျော်ကြီးက ရီဝေရင်ဘတ်ပေါ်သို.တက်ခွကာခေါင်းကိုကိုင်ကာ သူလီးကြီးအားရီဝေပါးစပ်ထဲသို.ထိုးထည့် လိုက်ပါသည်။
ပြွတိဘွတ် အား အု အု လီးတန်ကြီးသည်ပါးစပ်ထဲပြည့်နေကာ.လည်မျိုကိုပင်ထောက်နေပါတော.သည်။
အား အ အု အွတ် အွတ် အု အု ပြွတ် အ အ
ရီဝေလည်း ပါးစပ်ထဲသို. မဝင်သော လီးအရင်းပိုင်းကိုလက်ဖြင့် အသာဆုပ်ကိုင်ပြီး
ပါးစပ်ထဲဝင်နေသော လီး ထိပ်ပိုင်းကို လျှာနှင့်ရက်ကာ စုပ်ပေးနေပါတော.သည်။
ပါးစပ်ဖြင့် လီးတချောင်းလုံး ကိုငုံလိုက် လီးတန်လုံးပတ်ကို နှုနှုနှုတ်ခ မ်းပါးလး နှနှနှစ်ခုဖင်င
နှစ်ခုဖြင့်ငုံခဲပြီး ပါးစပ်ထဲရောက်နေသော လီး ကြီးအားလျာဖြင့်ရစ်ကာထိုးမွေလိုက်စုပ်လိုက်လုပ်နေတော.ကျော်ကြီးမှာ အရသာတွေ.နေပါတော.သည်။
ပြွတ် ပလွတ် အု ပု အု အု ပြွတ် ပ လွတ် အ အ
အချက်၄၀ခန်.ကျော်ကြီး အသွင်းအထုတ် လုပ်ပြီး ချိန်တွင်တော
မနေနိုင်တော.ပဲလီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲမှဆွဲထုတ်ကာ ရီဝေမျက်နှာ ပေါ် လရည်များ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော.သည်။
အား ပြီးပြီ အား ရှီး အား ရှီး အား အား
ကျော်ကြီးက ကျေနပ်သည့်အမူအရာဖြင့် သူလီးကြီးဖြင့် ရီဝေမျက်နှာအား ရိုက်ကာ သုတ်ကုန်အောင်လုပ်နေပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း ကျော်ကြီးအပြောကြောင့်ကျေနပ်ကာ လီးကြီးအားအရည်တွေပြောင်အောင်စုပ်ပေးနေပါတော.သည်။
ရီဝေလည်း ကျော်ကျော် ကအလိုလိုက်ထား၍ အထူးပင် ပျော်ရွင်နေလေသည်။အထူးသဖြင့် ကာမအရသာ ကိုလည်း တစိမ်းယောကျာ်းလေးများဖြင်.ခံစားနေရ၍ ကျေနပ်နေလေသည်။
ဒီနေလည်း ဈေးသွားမည်လို.စဉ်းစားပြီး အပြင်ထွက်လာခိုက် ရပ်ကွက်ထဲမှ မငယ် အမျိုးသား ဦးသိန်းအောင်နှင့်တွေ.သဖြင့် ကားကြုံလိုက်သွားလေသည်။
ဦးသိန်းအောင်မှာ အသက် ၅၅နှစ် ခန့်ရှိပြီး သူမိန်းမ မငယ်မှာ ၄၉နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဦးသိန်းအောင်မှာ မငယ်ကအသက်ကြီးနေ၍ ကြုံရင်ကြုံသလို ဖန်စားနေကြဖြစ်သည်။
သဘောင်္ သားလည်းဖြစ်၍ မိန်းမကိစ္စတော.ဝါသနာကြီးလေသည်။
ဒီနေလည်း မြို.ထဲသွားမလိုအပြင်ထွက်လာတုန်း လမ်းလျောက်နေသော ကောင်မလေးတယောက်အားတွေ.၍ ခဏမှင်တက်ကာ ငေးကြည့်နေမိလေသည်။
ကောင် မလေးမှာ ဘောင်းဘီ တို ဝတ်ထားပြီး အပေါ်ကတော.T shirt အကျီကိုဝတ်ထားလေသည်။
ထူးခြားသည်မှာ က ဘောင်းဘီ အောက်မှ စွင့်ကားနေသော ဖင်ကြီးများပင်ဖြစ်သည်။
သေချာကျော်ပြီးကြည့်လိုက်တော.မှ အိမ်ကိုလာနေကျ လမ်းထိပ်မှ ကျော်ကျော်မိန်းမ ရီဝေဖြစ်နေလေသည်။
ဒီကောင်မဘေးအရင်ကအိမ်ကို လာနေကြဖြစ်သော်လည်း သေချာမကြည့်မိ၍ အခုလောက်ထွားမှန်းမသိပေ။
ဦးသိန်းအောင်မှာကားကားရပ်ပြီး ရီဝေအား ဟေ. ရီဝေ. …. ဘယ်သွားမလို.လဲ
လမ်းကြုံလိုက်ခဲ.လေ ဟုခေါ်တော. ရီဝေလည်း ချက်ချင်းပင်ကားပေါ်တက်လာပါလေသည်။
ဈေးသွားမလို.အစ်ကိုရ … မငယ်ရော မပါဘူးလား
မငယ်အိမ်မှာကျန်ခဲ.တယ် အစ်ကို က မြို.ထဲသွားမလို.
ကောင်မလေးလှတယ်ဆိုပြီးနောက်ကကြည့် နေတာ ပြီးမှရီဝေဖြစ်နေလို…..
ေ့ပြပါတယ် အစ်ကို ဒါပေမယ် သူကခရီးသွားရတာများတယ်လေ
အော် အဲဒါကြောင့် ရီဝေက လှနေတာကို
မဆက်ဆံတာ များရင်အလှမပျက်ဘူးလေ ဟု အဓိပ္ပါယ် ပါပါရီဝေအားကြည့်ပြီးပြောလေသည်။
ရီဝေလည်း ဒါဆို အစ်ကိုတိုကတော.အစဉ်ပြေတာပေါ.ဟု ပြန် ပြောလေသည်။ေ
အင်း ပြေ တော.ပြေပါတယ်ဟ … ဒါပေမယ်. မငယ်က အသက်ကြီးနေပြီ
ငါကနင်တို. အရွယ်မှကြိုက်တာဟုပြောကာ စကားစလိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်း ဦးသိန်းအောင်စကားကြောင့် စိတ်ထလာပါတော.သည်။
ဦးသိန်းအောင်လည်း ရီဝေ က ဘာမှပြန်မပြောသဖြင့် အခြေအနေကောင်းလာပြီဟု ထင်မှတ်ကာ
ရီဝေလည်းဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ၍ ငြိမ် နေစဉ် ဦးသိန်းအောင်က ရီဝေပေါင်အားပွတ်လိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်းမလုပ်ပါနဲ.အစ်ကိုရယ် မကောင်းပါဘူးဟုပြန်ပြောတော.ဦးသိန်းအောင်က နားလည်လိုက်ပြီး ခဏလေးပါဟာ ဟုပြောကာ နီးစပ်ရာ hotel သို.တန်းမောင်းကာ ရီဝေပေါင်အားဆက်ပွတ်ပေးနေပါတော.သည်ေ။
ရီဝေလည်းမထင်မှတ်ထားသောကြောင့် သာယာနေမိက၊ာ အရည်များပင်ထွက်လာပါတော.သည်။
ဦးသိန်းအောင်မှာ ရီဝေစိတ်မပြောင်းခင်အမြန်လုပ်ထားမှကောင်းမယ်ဆိုတာသိနေ၍ အမြန်ပင်နှိုးဆွနေပါသည်။တော်ကြာရီဝေစိတ်ပြောင်းသွားလျှင်မလိုးလိုက်ရဖြစ်မှာစိုးနေသည်။
ဟင်း ဟင်း အ ဟင့် ဟင့် အ အစ်ကိုရယ် ရီဝေမှာတွန်.လိမ်ကာဘောက်းဘီပါချွတ်ချခံလိုက်ရတာမို.ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သွားကာ
ဦးသိန်းအောင်စိတ်ထဲတွင်တော. ကောင်းလိုက်တဲ.အိုးကွာ မထင်မှတ်ပဲလိုးရတော.မယ်ဟု ကျေနပ်နေလေသည်
ရီဝေလည်းစိတ်ပါလာကာဖင်ကြီးကို အနောက်ပစ်ပေးရင်း ဦးသိန်းအောင်လီးကြီးကို ဖင်နှင့်ပွတ်ပေးနေပါတော.သည်။
ဥဦးသိန်းအောင်ကတော.ရီဝေပေါင်ကိုပွတ်ရင်း စောက်ပတ်ကိုနှိုက်ကာ စောက်စေ.ကို လက်ညိုးနှင့်ဖိပွတ်ပေးလိုက်ရာ ရီဝေမှာ ကာမစိတ်များထကြွလာပါတော.သည်။ပြီးလျင်ရီဝေနှုတိခမ်းအားစုပ်ပေးကာသူလျာကြီးကိုလည်းရီဝေပါးစပ်ထဲထည်.ကာ မွေနေပါသည်။
အတန်ကြာစုပ်နမ်းပြီးနောကိဦးသိန်းအောင်က သူ ပုဆိုးအားချွတ်လိုက်ပြီးရီဝေကို ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းကာ
ရီဝေကဒူးထောက်ထားတာမို. အနောက်သို.ကားထွက်နေသည့် ဖင်ကြီးကို ဦးသိန်းအောင်ကြည့်ကာ ဖီးတက်လာပြီးရီဝေခေါင်းကိုကိုင်ကာသူလီးကြီးကိုရီဝေပါးစပ်ထဲညောင့်လိုးနေပါသည်။
အု အု အု ပြွတ် ပျွတ် အု အု အင့်နှင့်ရီဝေလည်းဖီးတက်လာကာလီဲးီးကို အာခေါင်ထဲသို့ဝင်အောင်စုပ်ပေးပြီးလျာဖျားလေးကလည်းအငြိမ်မနေပဲလီးတန်အောက်ကိုကလိပေးနေပါသည်။
ဦးသိန်းအောင်လည်းရီဝေလီးစုပ်ပေးမှုကြောင့် လီးကြီးမှာ တဇတ်ဇတ်နှင် မာတောင်လာပါတော.သည်။
ရီဝေ မနေနိုင်တော.ဘူးကွာ အစ်ကိုလိုးတော.မယ် ညီမလီးစုပ်တာ အရမ်းကောင်းတယ် ဟု ဦးသိန်းအောင်ကပြောကာ
ဗျိ ဗျိ ဖျွတ် ဖပ် ဖပ် ဘွတ် ဘွတ် အို. အ အ အ အစ်ကို ရာ် နာတယ် ဖြေးဖြေး ဆောင့်ပါအင်. အ အကျွတ် ကျွတ် ရှီး ရှီး အားလား အင် . အင်. အ အ နဲ့ရီဝေမှာ ဦးသိန်းအောင်လီးကြီးနှင့်မဆံ.မပြဲလိုးခံနေရသော်လည်းတဏှာကြီးသူမို.စောတ်ပတ်ညစ်ကစားပေးရင်းဖင်ကြီးကော.ကာအလိုးခံနေပါသည်။ဦးသိန်းအောင်လည်းလီးကြီးရုံမက အလိုးပါသန်သူမို.ရီဝေစောတ်ပတ်ကိုတရစပ် မနားတမ်းစောင့်လိုးနေပါသည်။အ အ ဗျွတ် ဖပ် ဖပ် ဖပ်စွပ် အ အ အားဟ အို အင့် အင့် အစ်ကိုရ်ာကောင်းလာပြီ
အင့် ရီး ရှီး အိ ကျွတ် ကျွတ် ဟင့် လိုး လိုးမရပ်နဲ. အား အား
ဦးသိန်းအောင်လည်းရီဝေကတကယ်အပေးကောင်းတယ် လီးစုပ်လည်းကောင်းတယ် စောက်ပတ်ကွဲအောင်လိုးပေးမယ်ဟုပြောကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုးနေပါသည်။
ပြွတ် ဖွတ် စွတ် စွတ် အ အ အားဇိ ဇွတ် ပြွတ် ပြွတ် အ အ အား ဦသိန်းအောင်လည်း မမျော်လင့်ပဲနှင်. ရီဝေအားလိုးခွင့်ရ၍ ကျေနပ်ကာ ဆောင့်လိုးနေပါသည်။
ရီဝေစောက်ပတ်ကြီးမှာလည်း လီးကြီးများနှင့် အလိုးခံထားရ၍အနည်းငယ်ကျယ်နေသော်လည်း ဦးသိန်းအောင်လီးကြီးနှင်.တော.အတော်ပင်ဖြစ်နေလေသည်။
အား အား ရှီးကောင်းလိုက်တာ ရီဝေရာ နင့် အဖုတ်ကလိုးလို.ကောင်းလိုက်တာ အား
ပြွတ် ပြွတ် စွတ် စွတ် အင့် အ အ ရီဝေလည်း ဦးသိန်းအောင်အပြောကြောင့်ပိုပြီးစိတ်ပါလာကာ အောက်ကနေပင့်ပြီးကော.ပေးနေပါတော.သည်။
စောင့် စောင်. အစ်ကိုကြီးစောင့် ညီမကောင်းလာပြီ မြန် မြန် လေး စောင့်
ဒုတ်ဒုတ်ပြွတ် အ အ ပြွတ် အား အား အား ပြွတ် ပလပ် ပလပ် အ အ
ဦးသိန်းအောင်လည်း ၅မိနစ်လောက်ဆက်တိုက်လိုးပြီးနောက် ရီဝေ ပုံစံပြောင်းလိုးဩအောင်ဟုဆိုကာ သူလီးကြီးအားရီဝေအဖုတ်ထဲမှချွတ်ကာရီဝေအား ကုတင်ပေါ်မှလေးဘက်ကုန်ခိုင်းပြီး သူ ကတော ကု တင်အောက်မှ နေပြီး ရီဝေအဖုတ်ထဲသို.သူလီးကြီးထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
အား ကောင်းလ်ုက်တဲ.ဖင်ကြီးကွာ ငါ.မိန်းမနဲ.ကွာပ. အိုးလေးကို ကားနေတာပဲအဲဒီအိုးကြီးပြုတ်သွားအောင် လိုးပစ်မယ်
ရီဝေလည်း စိတ်တွေပါနေကာ အစ်ကို သဘောလေ အစ်ကို စိတ်ကြိုက်တာ ညီမကို လုပ်တော.အစ်ကို လီးကြီးကို ကြိုက်သွားပြီဟု ပြော ကာ အရသာ ခံနေပါတော.သည်။
ဦးသိန်းအောင်လည်း ယခင် ကရီဝေ ဒီလောက် တဏှာစိတ်ကြီးမှန့်းသိရင် အရင်ထဲက ရအောင်ဖန်ပါတယ်ဟုတွေးနေကာ လီးကြီးကိုတော.အဆက်မပြတ် ဆောင့် လိုးနေပါသည်။
အား ပြွတ် ဒုတ် ဒုတ် အု အ အ အား လားရှီး ကောင်းလာပြီ အစ်ကို ညီမပြီးတော.မယ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောက့် ပေးပါ အားအေား
ဦးသိန်းအောင်လည်းရီဝေစကားကြောင်း ရီဝေပုခုံးအားဆွဲကိုင်ကာ အသားကုန်ပင်စောင့် လိုးနေ ပါသည်။
အာအား ပြီးပြီအစ်ကို အား အ၊ား အား ကောင်းလိုက်တာ အစ်ကို ရာ ဟုပြော ကာ ရီဝေလည်း ပြီး သွားပါသည်။
ဦးသိန်းအောင်ကတော.မပြီးသေးပဲ ရီဝေအား သူ အပေါ်ကိုတက်စောင့် ခိုင်းပြန်လေသည်။
ရီဝေလည်းဦးသိန်းအောင်စိတ်တိုင်းကျ ပုံစံမျိုးစုံဖြင်. အလိုးခံရင်း ဦးသိန်းအောင်မှာ ထိုနေ.က ရီဝေကို ၃ချီလောက်အားရအောင်လိုးပြီး အိမ်ပြန်ပို.လိုက်လေတော.သည်။
ရီဝေလည်း မမျော်ှလင်.ပဲ. ဦးသိန်းအောင်နှင့် လိုးခဲ.ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဦးသိန်းအောင်၏လိုးချက်များကို စွဲလမ်းနေမိပြီး
ဦးသိန်းအောင်ကလည်း အသက်ငယ်ငယ်ကောင်မလေးအား စိတ်တိုင်းကျလိုးနေရ၍ ကျေနပ်နေလေသည်။
ဒီနေ.လည်း ရီဝေအား လိုးရန်အတွက် သူအိမ်မှ သွားခေါ်လာပြီး ဟိုတယ်သို.မလာခြင်း ဖြစ် သည်။
ဦးသိန်းအောင် လည်း အခန်းထဲရောက်သည်နှင့်သူ.အဝတ်အစား များ ချွတ် ကာ သဘတ်ပတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေလိုက်သည်။
ရီဝေလည်းအအဝတ်အစား များချွတ်ကာကုတင်ပေါ်သို.တက်ကာ ဦးသိန်းအောင်ပေါ်တက်အိပ်ပြီး နနှုနှုတ်ခမ်း ချင်းစုပ်နမ်းရင်း လက်တဖက် က လီးကြီးအားတောင်လာစေရန် ဆွပေးနေလေသည်။သူ.လျှာအားပါးစပ်တွင်းသို. ထိုးထည့်ပြီး ကလိနေသဖြင့် ဦးသိန်းအောင်လည်း မနေနိုင်တော.ပဲ ကဲ အစ်ကိုကြီး ကို လီးစုပ်ပေအုံး ရီဝေ ဟုဆိုကာ ကုတင်စောင်းတွင်ခြေထောက်ချကာထိုင်လ်ုက်လေသည်။
ရီဝေလည်း ကုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီး ဦးသိန်းအောင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြား ဒူးထောက်ထိုင်ကာလီးကြီးအားမက်မောစွာကြည့်ရင်းလက်တဖက်က လီးကြီးအားကိုင်ကာ ပါးစပ်သွင်းတို.ငုံစုပ်လိုက်လေသည်။
ရီဝေမှာ လီးပေါင်းများစွာ စုပ်ပေးဖူးသူမို.အတော်ပင်ကျွမ်းကျင်ကာ လျှာဖျားလေးဖြင့် ဒစ်ကို လျက်ပေးလိုက် ဂွေး ဥ ၂လုံးကိုလည်း ရက်ပေးလိုက်နှင့် အစွမ်းကုန်ပြုစုရင်း လီးကြီးကိုစုပ်ပေးနေတော. ဦးသိန်းအောင် မှာကာမအရသာ တွေ ရနေကာ အကြောများပင့လိုက်နေပါတော.သည်။
ဦးသိန်းအောင် လည်း ရီဝေ၏ပါးစပ်ထဲ သူ လီး ဝင်ထွက်နေပုံကိုကြည့်ရင်းစိတ်ပါလာ ကာ ရီဝေခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲသို.ညှောင်.ပေးနေပါသည်။
အတန်ကြာလီးစုပ်ပေးပြီးနောက် ရီဝေလည်း အလိုးခံချင်နေပြီမို့ မတ်တက်ရပ်ကာ ဦးသိန်းအောင်ကိုသိုင်းဖက်ရင်း
အစ်ကိုကြီး ရီဝေကိုလိုးတော့လေဟုပြောကာ လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ ရီဝေကုန်းပေးလိုက်သဖြင့်စောက်ပတ်ကြီးမှာ
ပြူးထွက်လာပြီးဖင်ကြီးနှစ်လုံးကြားထင်းခနဲဖြစ်နေတာမို့ ဦးသိန်းအောင်လည်း ကြည့်ရင်းလီးကြီးမှာပိုတောင်လာကာရီဝေဖင်ကြီးအားခွကာ
စောက်ပတ်ဝအား ဒစ်တေ့ပြီးသွင်းလိုက်ကာ ရီဝေခါးကို ကိုင်ကာ အသားကုန်ပင်ဆောင့်လိုးလိုက်လေသည်။
ဗျွတ် ဗျွတ် ဘွတ် ဘွတ် အင့် အ အ အ အိုး အိုး ဟင်း ဟင်း အ အီး အီး အစ်ကိုကြီးရယ် နာတယ် အ အ အား
ရီဝေလည်းလီးကြီးနှင့် ဖင်ကုန်းအလိုးခံနေရတာမို့ စောက်ပတ်ကွဲမတက် အီဆိမ့်ကာမွေ့ယာကိုဆုပ်ကိုင်ကာ အံကြိတ်ခံနေပါတော့သည်။
ဘွတ် ဘွတ်ဗျစ် ဗျစ် အိ အား အား ဗျစ် ဗျစ် အင့် အ အ
ရီဝေ နင့်ဖင်ကြီးက ကောင်းလိူက်တာ အိနေတာပဲ စောက်ပတ်ကြီးကလည်း စည်းပြီး လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာဟာ ဟု ဦးသိန်းအောင်က ပြော ကာ အသားကုန်ပင်ဆောင့်လိုးနေပါသည်။
ဘွပ် ဘွပ် ဖျွပ် ဈွပ် ဖပ် ဖပ် အင့် အား အ အားလား အစ်ကိုကြီးရယ် အစ်ကိုကြီးကသာ လိုးလို့ကောင်းနေတာ ရီဝေ့စောက်ပတ်လေးတော့
ပြဲမတက်ပါပဲ အီး အား အင့် အင့် လီးကြီးကလည်း ကြီးလိုက်တာ
ဗျပ် ဗျွပ် အင့် အား ဖပ် ဖပ် ဖပ် အင့် အ အစ်ကိုကြီး ကောင်းလိုက်တာ ဆောင့် ဆောင့် နာနာဆောင့်ဟု အော်ကာ ဦးသိန်းအောင်အလိုးကို ခံနေပါတော့သည်။
အချက် ၅၀ခန့်မနားတမ်းဆောင့်ပြီး ဦး သိန်းအောင် ကသူ့လီးကြီးအား ရီဝေ စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ကဲရီဝေ ပက်လက်လှန်ပေး
အစ်ကိုကြီး အပေါ်ကတက်လိုးမယ်ဟု ပြောတော့ ရီဝေလည်း ပက်လက်လှန်ကာ ပေါင်ဖြဲပေးရင်းဦးသိန်းအောင်လီးကြီးအားကိုင်ကာစောက်ပတ်ဝကိုတေ့ပေးလိုက်လေသည်။
ဦးသိန်းအောင်လည်း ရီဝေဖင်ကြီး၂လုံးကို ဒူးနှစ်ဖက်ညှပ်ကာ ဒစ်ကြီးကိုတေ့ကာသွင်းလိူက်ပြီး ဒစ်မြုတ်သွားသည်နှင့်ခါးကို ကိုင်ကာမီးကုန်
ဗျိ ဗျစ် ဗျစ် ဈွပ် ဘွပ် ဘွပ် အင့် အ အ အား အစ်ကိုကြီးရာ ပြည့် ကျပ်နေတာပဲကောင်းလိုက်တာ
ဦးသိန်းအောင်လည်း သူ့လီးကြီး ရီဝေ စောက်ပတ်ထဲထည့်လိုက်တိုင်းစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများလိပ်ဝင်သွားပြီးလီးကြီးပြန်အထုတ်တွင်
ရီဝေလည်း အင့် အ အ အာ ဟာ ဟင့် ဆောင့် ဆောင့် ညီမပြီးတော့မယ် အ အ အင့်ဟ ဟ အားလားအင့် အ ကောင်းလိုက်တာ
အစ်ကိုကြီးရယ် ရီဝေပြီးသွားပြီ အိ အ ဟုအော်ကာ ရီဝေမှာ စောက်ရည်များထွက် သွားပါတော့သည်။
ဦးသိန်းအောင်လည်း ပြီးကာနီးပြီမို့ ကဲ ရီဝေ ပါးစပ်ထဲလိုးချင်တယ်ဟု ပြောတော့ ရီဝေလည်း အစ်ကိုကြီးသဘောဟုပြောကာ
ပက်လက်လှန်ပြီး ကုတင်ထောင့်တွင် ခေါင်းတင်ပြီးနေပေးလိုက်ရာ ဦးသိန်းအောင်လည်း ရီ ဝေခေါင်းပေါ်ခွထိုင်ပြီး
ပါးစပ်ထဲ အချက်၃၀ခန့်ဆောင့်လိုးရင်း ပြီးသွားတာမို့ သုတ်ရည်များ ရီဝေ့ပါးစပ်ထဲသို့ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်းသုတ်ရည်များကို တစက်မကျန် မြိုချလိုက်လေတော့သည်။
ရီဝေက အစ်ကိုကြီးကိုချစ်လို့မြိုချတာနော်ဟု ညုတုတု ပြောနေပါတော့သည်။
ဦးသိန်းအောင်လည်း ရီဝေအား အားရအောင်လိုးပြီးညနေစောင်းမှပြန်ပို့ပေးလိုက်လေသည်
ရီဝေလည်း အရသာအပြည့်ရပြီး ကျေနပ်သွားလေတော့သည်။
နောက်တနေ့ကျတော့ရီဝေတို့အိမ်ကို သူ့ဦးလေးဝမ်းကွဲ ကျော်ဇေယျဆိုသူ နယ်မှ ရောက်လာလေသည်။
ကျော်ဇေယျဆိုသူသည် အရက်သမားဖြစ်ပြီး အမြဲမူးရူးနေသူဖြစ်ကာ ဘယ်အမျိူးကမှသူ့အားလက်သင့်မခံလိုကျပေ။
အခုလည်း ဘယ်လိုအကြောင်းနှင့်ရီဝေတို့အိမ်ရောက်လာလဲ မသိပေ။
ဦးကျော်ဇေယျ ဘယ်က နေဘယ်လိုရီဝေတို့အိမ်ရောက်လာတာလဲဟု မေးတော့
နင့်အဒေါ်တွေကငါ့ကို အမြဲမူးနေလို့ဆိုပြီး အိမ်ပေါ်ကနှင်ချလိုက်လို့ဟေ့
” အော် ရပါတယ် အိမ်မှာလဲ လူနည်းပါတယ် “သမီးကိုတော့မရစ်ရင်ပြီးတာပဲ အေးဆေးတာနေဟု ရီဝေကပြောလိုက်လေသည်။
မလာသေးဘူး ခရီးထွက်သွားတယ်လေ နောက် ၂ရက်လောက်မှပြန်လာမှာ
အော် အေး အေး
ညနေရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျော်ဇေယျ က မူးပြီးပြန်လာလေသည်။
ဘယ်နေရာမှာချော်လဲလာလဲမသိ တကိုယ်လုံးပေရေနေပြီး လူကတော့ ယိုင်ထိုးနေလေသည်။
”ဦးကျော်ဇေယျ မူးလာပြန်ပြီ” ဘယ်မှာလဲချော်လဲလာပြန်ပြီလဲ တကိုယ်လုံးလဲ ညစ်ပတ်နေတာပဲ
မမူးပါဘူး တူမကြီးရာ လမ်းမှာ ထိုင်မိတာပါ ဟု မပီမသပြန်ပြောလေသည်။
ကဲကဲ ထားတော့ အဝတ်တွေချွတ်ပြီးလဲထားလိုက် ဟု ရီဝေပြောတော့
ကျော်ဇေယျလည်း ရေချိူးခန်းထဲသို့ ဒယီးဒယိုင်နှင့်ဝင်သွားလေသည်။
အနည်းငဟ်ကြာတော့ ” ဘိုင်း ဘုန်းဘုန်း ဘုန်း ”ဟုရေချိူးခန်းထဲမှအသံများကြားတော့
ရီဝေလည်း အတင်းပင်ပြေးသွားကြည့်တော့ ဦးကျော်ဇေယျမှာ သူ့jean ဘောင်းဘီအားချွတ်ရင်း ချော်လဲ နေလေသည်။
အာ ဦးကျော်ဇေယျတော့ ဖြစ်ပြန်ပြီ ကဲကဲ ခြေထောက်မြှောက်ထား ရီဝေဝိုင်းချွတ်ပေးမယ် မူးနေတာအရမ်းပဲ
ရီဝေလည်း ဦးကျော်ဇေယျ ခြေထောက်အောက်ကနေပြီး ဘောင်းဘီအား ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ
”ဟာ ” ဟင်” နှစ်ယောက်စလုံးပါးစပ် မှ အလန့်တကြား အသံတွေထွက်ကုန်လေသည်။
ရီဝေက jean ဘောင်းဘီအောက်မှာ အတွင်းခံရှိမယ်ထင်၍ ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ဦးကျော်ဇေယျမှာ အတွင်းခံဝတ်မထားတော့
ကျော်ဇေယျလည်းတူမရှေ့မှာ လီးတန်းလန်းကြီးဖြစ်သွားသဖြင့် လန့်သွားလေသည်။
ရီဝေကတော့ အံအားသင့်ကာ မျက်လုံးကတော့ လီးကြီးကမခွာနိုင်ဖြစ်နေလေသည်။
နဂိုကတည်းက လီးမြင်လျှင်မနေနိုင်သူမို့ သေချာပင်စိုက်ကြည့်နေလေသည်။
ကျော်ဇေယျလည်းရီဝေကသူလီးကြီးကို စိုက်ကြည့်နေ၍ စိတ်ထဲတမျိူးဖြစ်ကာ တောင်ချင်သလို ဖြစ်လာလေသည်။
တူမကြီး က ဦးလီးကိုဘာလို့စိုက်ကြည့်နေတာတုန်းဟု မေးလိုက်ရာ ရီဝေလည်း အသိပြန်ဝင်လာပြီး
ဘာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟု ပြောကာ လှည့်အထွက် ကျော်ဇေယျလည်း စိတ်ပါလာကာ
ရီဝေလည်း ကြောင်သွားကာ အနမ်းခံလိုက်ပြီး နောက်မှ အတင်းရုန်းကာ
ဦးကျော်ဇေယျ ကိုယ့်တူမကို အခုလိုမလုပိသင့်ဘူးလေဟုပြောတော့
ဦးကျော်ဇေယျက တူမကြီးရယ် ဦးကအမြဲ အရက်အကြောင်းပဲ ခေါင်းထဲရှိတာပါ
အခုကတူမကြီး ဦးလီးကို စိုက်ကြည့်တော့ မနေနိူင်တော့လို့ပါ ဦးကိုကူညီပါနော်ဟုပြောကာ
လျှာကိုရီဝေပါးစပ်ထဲအတင်းထိုးထည့် လေသည်။ရီဝေလည်း ညင်းချင်ပေမယ့် မထူးတော့ပါဘူးဟုတွေးကာ လျှာကို ပြန်စုပ်ပေးလိုက်လေသည်။
ရီဝေကလက်ခံသဖြင့် ဦးကျော်ဇေယျလည်း လက်တဖက်က ရီဝေဖင်လုံးကြီးကိုညစ်ရင်း ကျန်လက်တဖက် ရီဝေ့ထမိန်အားဆွဲချွက်ကာ
ဦးကျော်ဇေယျလည်း စုပ်နမ်းနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီးပေါင်နှစ်ချောင်းအားဖြဲကာ ရီဝေစောက်ဖုတ်ကြီးအားကုန်းလျက်လေတော့သည်။
”အား ရှီး အာလား အား ”.ရီဝေလည်း စိတ်တွေထကြွပြီးအလိုးခံချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေလေသည်
ဦးကျော်ဇေယျ လည်း အစိလေးအားမနာအောင်ကိုက်ကာ အဖုတ်ကြီးအားအပီအပြင်ရက်ပေးနေပါသည်။
ကောင်းလိုက်တာ တူမကြီးရာ နင့်အဖုတ်ကြီးက ဖောင်းကားနေတာပဲ
သမီးလည်းကောင်းနေပြီ ဟု ရီဝေ ကပြောတော့အဖုတ်ရက်ပေးနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ရီဝေအပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်တော့
ရီဝေလည်း အလိုကိတသိပင် လီးကြီးအားကိုင်ကာ သူ့အဖုတ်ဝကိုတေ့ပေးလိုက်လေသည်။
လီးကြီးမှာ မာတောင်နေပြီး သာမန်ထက်ပင် ပို၍ တောင်နေသလားဟုရီဝေထင်မိသည်။
အား ဒုတ် ဒုတ် အား ပြွတ် ပြွတ် အား ဦး ဖြေး ဖြေးလိုးပါ နည်းနည်း နာလို့ဟု ရီဝေကပြောသော်လည်း
ငတ်ပြတ်နေသော ကျော်ဇေယျမှာ မညှာပဲ အတင်းပင်ဆောင့်လိုးနေလေသည်။
အား ပြွတ် ဗြွတ် အင့် အ အ အားလား သေပါပြီ ပြွတ် ဖွတ် စွပ် စွပ် အင့် အ
အချက်၅၀ခန့် လိုးပြီးနောက် ဦးကျော်ဇေယျလည်း ရီဝေနို့အားဆွဲကာ မှန်မှန်ပင်ပြန်လိုးနေလေသည်။
ရီဝေလည်း ခံနိုင်လာပြီး အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးနေပါသည်။
အား အား ဦး လိုး လိုး ဆောင့်လိုးလို့ရပြီ လိုး လိုး အင်း အ အ
ရီဝေပြောစကားကြောင့် ဦးကျော်ဇေယျလည်း စိတ်ပါလာကာ အသားကုန်ပင်ဆောင့်လိုးနေပါတော့သည်။
အင်း ပြွတ် ပြွတ် ဒုတ် ဒုတ် အင့် အ အ အား
ရီဝေ ဦးလီးကြီးကိုကြိုက်လား ကြိုက်တာပေါ့ဦးရယ် နာနာဆောင့်ပေးစမ်းပါ ကောင်းနေပြီ
အ အ အား ကောင်းတယ် ဆောင့် ဆောင့် ဆောင့်
ဦးကျော်ဇေယျလည်း ရီဝေစိတ်ကြိုက်ဆောင့်ပေးနေပြီး လက်တဖက်ကအစိလေးအား ကလိပေးနေရာ ရီဝေ့အဖို့တော့ ပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်နေ
လိုး လို့ ကောင်းလိုက်တာတူမကြီးရာ
ရီဝေလည်း အောက်ကနေ ကော့ပေးနေပြီး တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်းအရသာအပြည့်ဖြစ်နေလေတော့သည်။
ရီဝေဆောင့်လိုးတာခံနိုင်ရင် ဦးခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးပေးရမလားဟု ကျော်ဇေယျက ရီဝေနဖူးလေးအားနမ်းရင်ပြောတော့
အင်း လိုး လေ ဦးသဘောဟု ရီဝေကပြန်ပြောလိုက်လေသည်။
ရီဝေအပြောကြောင့် ဦးကျော်ဇေယျလည်း စိတ်ပိုထန်လာကာ တလကြမ်းပင်ပယ်ပယ်နယ်ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။
”အင့် ” ဒုတ် ဒုတ် အ အ အား ပြွတ် ဖွပ် စွပ် စွပ် အင့် အ အား ရှီး အား ကောင်းလိုက်တာဦးရယ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်ပေးပါ
ရီဝေလည်း ဆောင့်ချက်များကို သာယာနေမိပြီး ပါးစပ်ကပင်မရှက်နိုင်ပဲ အတင်းလိုးခိုင်းနေပါတော့သည်။
၅မိနစ်ခန့် လိုးပေးပြီးနောက် ကျော်ဇေယျ က တူမကြီး ပုံစံပြောင်းရအောင်ဟုဆိုကာသူ့လီးကြီးကိုရီဝေအဖုတ်ထဲမှဆွဲထုတ်လိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်းလီးကြီးသူ့အဖုတ်ထဲမှထွက်သွားတော့ဟာတာတာဖြစ်ကာ လီးကြီးအား အငမ်းမရစိုက်ကြည့်နေလေသည်။
လီးမျိူးစုံနှင့်ခံဘူးသော်လည်း အခု သူ့ဦးလေး အရက်သမားနှင့်ကျမှ တော်တော်လေး အားရကျေနပ်နေလေသည်။
ရီဝေ လေးဘက်ကုန်းလိုက် ဦး နောက်ကနေလိုးပေးမယ်
ရီဝေလည်း ခံချင်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ချက်ချင်းပင်လေးဘက်ကုန်းပေးလိုက်ပါသည်။
ဦး ကျော်ဇေယျလည်း ရီဝေဖင်ကြီးကိုကြည့်ကာ ကျေနပ်နေပြီး အခုလို ကောင်း ကောင်း ကန်းကန်းမလိုးရသည်မှာကြာနေပြီ
ဖြစ်သည့်အပြင် ဖင်ကြီးကလည်း ကားပြီး အဖုတ်ကြီးမှာပြူးနေရာ နောက်ကနေ ပြီး လီးကြီးအားတေ့ကာလိုးလိုက်လေတော့သည်။
လီးကြီးမှာလည်း အဖုတ်ထဲသို့ တဆုံးဝင်သွားလိုက် တဆုံးထွက်လိုက်နှင့် အရသာခံလိုးနေပါသည်။
ရီဝေကောင်းလား ကောင်းတယ် အ အ အဆုံးထိပဲ ဦးရယ် သားအိမ်တောင်ထောက်နေပြီ အ အ ပြွတ် ပြွတ်
ရီဝေလည်း ဆောင့်ချက်များ ကြောင့် ဘယ်နှစ်ခါပြီးမှန်းတောင်မသိဖြစ်နေတော့သည်။
ကျော်ဇေယျလည်း ရီဝေဖင်ကြီးအားကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့ပဲ ရီဝေဆံပင်အားဆွဲကာအသားကုန်ဆောင့်လိုးနေပြီး
ခပ်တောင့်တောင့်တူမကို အပီလိုးနေရသဖြင့် လပေါင်းများစွာ အောင်းနေသောသုတ်ရညိတွေဟာ အပြင်ကို ပန်းထွက်လာကာ ရီဝေ့အဖုတ်ထဲဝယ်သုတ်ရည်များ ပြည့်လျှံကျကုန်ပါတော့သည် ။
အား အား အီး အီး ပြီးပြီ ပြီးပြီ ကောင်းလိုက်တာရီဝေရာ
ပြီးသွားသော်လည်း လီးကြီးမှာ အဖုတ်အတွင်း တဆက်ဆက်တိုးနေပြီး ကျော်ဇေယျက စိမ်ပြီး မှိန်းနေလေသည်။
အတန်ကျမှ ကျော်ဇေယျလည်းသူ့လီးကြှီးကို ရီဝေအဖုတ်ထဲမှဆွဲထုတ်လိုက်တော့လရည်များပါ ဝေါကနဲ စီးကျလာလေသည်။
ကျော်ဇေယျလည်း တူမကိူ မမျှော်လင့်ပဲ အပီ အပြင်လိုးလိူက်ရ၍ကျေနပ်နေလေတော့သည်။
ဘေးမှာလှဲနေသော ရီဝေ အပေါ်ကိုခွကာ ရီဝေ ဦးလီးကြီးကိုစုပ်ပေးပါအုံး ဟုဆိုကာ လီးကြီးအားရီဝေပါးစပ်နားတေ့လိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်း လီးမြင်တာနှင့် အငမ်းမရပင် လီးကြီးအားပါးစပ်နှင်ငုံ ကာအာငွေ့ ပေးလိုက်လေသည်။
ပထမတချီပြီးထား၍ လီးကြီးမှာပေကျံနေသော အရည်များလည်း ရီဝေစုပ်ပေးမှုကြောင့် ပြောင်လက်လာကာ
အား ရှီး ကောင်းလိုက်တာရီဝေရာ စုပ် စုပ် စုပ်
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် အင်း အင်း ရီဝေမှာသူ့ဦလေးလီးကြီးအား အပီအပြင်စုပ်ပေးကာ ဥများကိုပါငုံစုပ်ပေးနေတော့
ကျော်ဇေယျလည်း မခံနိူင်တော့ပဲ အရည်ကြည်များပင် စိမ့်ထွက်လာပါတော့သည်။
ကြာတော့မခံနိုင်တော့ပဲ ရီဝေလိုးတော့မယ်နော် ဟုပြောကာ ရီေ အား အေါ်ကတက်ဆောက့်ခိူင်းလေသည်။
ရီဝေလည်း သူ့ဦးလေးအပေါ်ကိုတက်ခွကာ လီးကြီးအားကိုင်ကာသူ့အဖုတ်ထဲသို့ဆောင့်ထည့်လိုက်လေသည်။
ရီဝေလည်း လီးကြီးအားစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား အတွင်းသားတို့ဖြင့်ဖြစ်ညစ်ပေးလိုက်ရာ ကျော်ဇေယျအတွက်တော့ အတွေ့ထူးနေပါသည်။
အား အား ပြွတ် ပြွတ် ဆောင့် ပေး ရီဝေ ဆောင့် ဆောင့် ပြွတ် အင့် အ ကောင်းလိုက်တာကွာ
လီးကြီးမှာ ကြီးမားလွန်း၍ စောက်ပတ်ထဲတွင်ချောင်မနေပဲ ပြည်သိပ်နေတော့ ရီဝေအကြိုက်ဖြစ်ကာနေတော့သည်။
ဖွတ် ဖွတ် ဒုတ် အင့် အင့် အား အား ပြွတ် ပြွတ်
ကောင်းနေပြီဖြစ်သောရီဝေသည် အပေါ်မှခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်လ်ုးပေးနေရင်း လီးးအရသာကိုခံနေပါတော့သည်။
ကျော်ဇေယျလည်း အောက်ကနေပင့်လိုးနေရင်းရီဝေနို့အုံကြီးအားဆွဲဆောင့်ကာ လီးကြီးအား ပင့်တင်ပေးနေသဖြင့်ရီဝေလည်း
အ အ အား ဦးရယ် ရီဝေပြီးပြီ အ အ အားရှီး
ရီဝေပြီးသွားသဖြင့် ကျော်ဇေယျလည်း လီးကြီးအားရီဝေအဖုတ်မှချွတ်ကာ
တူမကြီး ဦး ကမပြီး သေးဘူး
ဦး လီး ကြီး ကို စုပ်ပေးအုံးနော် ဟု ပြောတော့ ရီဝေလည်းဒူးထောက်ထိုက်လိုက်ပြီး လီးကြီအားအသာဆုပ်ကိုင်ကာ
ဒစ်ကိုပါးစပ်ဖြင့် စုပ်လိုက်လေသည်။ထို့နောက်လီး တန် တလျောက်လျှာနှင့်ရက်လိုက် ဖွဖွငုံလိုက်နှင့် ဥများကိုပါငုံစုပ်လိုက်လေသည်။
အား အားစုပ် စုပ် ရီဝေ စုပ်ပေး အား အာ
ကျော်ဇေယျလည်း ရီဝေ လီးစုပ် ပေးနေတာကို အရသာ ခံရင်း စိတ်က မနေနိင်တော့ပဲ
ရီဝေခေါင်း အား က်ုင်ပြီးလျှင် ပါးစပ်ထဲသို့ သူ့လီးကြီးအား အတင်းထိုးသွင်းပြီး ဆောင့်လ်ုးနေပါသည်။
ရီဝေလည်း ပါးစပ်ထဲလီး အဝင် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးနေပြီး ကျော်ဇေယျ ပါးစပ်ထဲလိုးသွင်းနေမှုကိုကျိတ်ခံနေတော့သည်။
အချက် ၃၀ လောက်ရီဝေ ပါးစပ်ထဲ လိုးနေပြီး နောက်
ရီဝေ ပါးစပ်ထဲသို့ လရည်များ ပန်း ထုတ်လိုက်လေတော့သည်။
အား အားဗျစ် ဗျစ် အား ပြီးပြီ တူမကြီးရေ
ရီဝေ လည်း မထူးတေ့ာ့ပြီမို့လရည်များအားတစက်မကျန်မျိူ ချလိုက်လေတော့သည်။
ရီရီဝေ ၏ မှားခဲ့သောဇာတ်လမ်း များ ပြီးပါပြီ
ရေးသူ = roonay (အချစ်တက္ကသိုလ်)